စိတ်ကူးပျော်ရာ: March 2014
အောက်တွင် ဖော်ပြရေးသားမည့် ရောဂါရှိသူများ တွင် ပဋ္ဋိသန္ဓေ တားဆေး သုံးစွဲရန် မသင့်
(၁) သွေးပြန်ကြောပိတ် ရောဂါ ၊ ဦးနှောက် သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ
(၃) ဟိုမုန်း ( Esirogen ) မတည့်သော အကျိတ်ကင်ဆာ ရောဂါ
(၄) အကြောင်းမဲ့ မကြာခဏသွေးဆင်းရောဂါ
(၅) ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟု သံသယဖြစ်နေသူ
(၆) အသည်းရောဂါ အမျိုးမျိုး ရှိသူ ဖြစ်နေသူ
များသည် ပဋ္ဋိသန္ဓေတားဆေး ကို သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်းသတိပြုစေချင်ပါသည် ။
ဆေးအန္တရာယ် အကြောင်း ……………..
(၁) ပဋ္ဋိသန္ဓေတားဆေးကြောင့် သွေးပြန်ကြောပိတ်ခြင်း သွေးပြန်ကြောအတွင်း သွေးခဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည် ။ဆေးသုံးစွဲသူများတွင် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရန် ၂ ဆမှ ၁၁ ဆအထိ အန္တရာယ်ပိုမိုကြောင်းသိရသည် ။
ဦးနှောက်တွင်း သွေးကြောကျဉ်းခြင်း ၊ ပိတ်ခြင်းမှာ သုံးစွဲသူများတွင် ၂ ဆ ပိုမိုဖြစ်တတ်သည် ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါများလည်းဆေးသုံးစွဲသူများတွင် ပိုမိုဖြစ်တတ်သည်။
အထူးသဖြင့် အသက် (၃၅ )နှစ်ကျော်ပြီးဆေးလိပ်သောက်သူ၊သွေးတိုးရှိသူ ၊ ဝလွန်းသူနှင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများတွင် ပိုမိုအန္တရာယ်များပါသည်။
တားဆေးကို အသက် ၃၅ နှစ်အထက် အမျိုးသမီးများတွင် ဆေးကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက်စားလာပါက သွေးကြောကျဉ်းရောဂါများကြောင့် သေဆုံးမှုမှာ ၁၀ ဆ ကျော်များပြားလာကြောင့်တွေ့ ရပေသည်။
(၂) မျက်စိအတွင်းခံအာရုံကြောကို ရောင်စေသည်။ဆေးသောက်နေစဉ် မျက်စိမှုန်လာခြင်း ၊ မျက်ခွံကျခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆေးကိုရပ်ပြီး မျက်စိစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သည် ။
(၃) ပဋ္ဋိသန္ဓေတားဆေး ကိုကြာရှည်စွာသောက်သုံးပါက ရင်သား ၊ သားအိမ် ၊ သားဥအိမ် နှင့် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ရန်အလားအလာရှိပါသည် ။
(၄) ပဋ္ဋိသန္ဓေတားဆေးကြောင့် အသည်း ၊ အကျိတ်လုံးပေါက်ခြင်း ၊ အသည်းရောင်ခြင်း ၊ အသည်းမာခြင်း နှင့် အသည်း ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းတိုကို့ တွေ့ ရသည် ။
(၅) သည်းခြေအိတ် ရောင်ခြင်းနှင့် သည်းခြေအိတ်ရောဂါ အမျိုးမျိုး တို့ ဖြစ်တတ်ကြောင့်တွေ့ ရသည် ။
(၆) ဆေးသုံးစွဲသူများတွင် သွေးတိုး ရောဂါဖြစ်နူန်းများပြားလာကြောင်းသိရသည် ။ ပဋ္ဋိသန္ဓေတားဆေးကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက်သုံးစွဲပါကသွေးတိုးဖြစ်နှုန်းမှာ ၃ – ဆ ပိုမိုများပြားသောကြောင်း သိရသည် ။
(၇) သွေးဆင်းများခြင်း ၊အနည်းငယ်ဆက်တိုက်ဆင်းခြင်း ၊ ရာသီသွေး မလာခြင်းစသော ရာသီသွေးမမှန်သည့်ရောဂါ လက္ခဏများပေါ်ပေါက်တတ်သည်။
(၈) ကိုယ်လက်ရောင်ခြင်း ၊ ဖောခြင်း ၊ ဆေးဖြတ်လိုက်သော်လည်း မြုံသွားခြင်း ၊ ရာသီလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ၊ သားမြတ်ရောင်ခြင်း ၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း ၊ ကိုယ့်အလေးချိန် ကျခြင်း ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ အရေပြားယားနာများ ပေါက်ခြင်း ၊စိတ်ညစ်ခြင်း ၊ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း ၊ မျက်စိတိမ်ကွယ်ခြင်း ၊ ဖိုမ စိတ်ဆန္ဒ အပြောင်းအလဲရှိခြင်း ၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း ၊ ခြေလက်ထုံကျဉ်ခြင်း ၊ ခေါင်းမုးခြင်း ၊ နှာမွှန်ခြင်း ၊ မောပန်းလွယ်ခြင်း ၊ ခါးကိုက်ခြင်း ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးများပေါက်ခြင်း ၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ၊ ယားယံခြင်း ၊ အရေပြားအောက် သွေးယိုခြင်း ၊ သွေးအားနည်းခြင်း ၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း ၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း နှင့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်
( မိမိရဲ့ ဗဟုသုတကို Sharing လုပ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပါ။ )
Women's World Myanmar
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:52:00 AM No comments:
တစ်ချို့အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ဓာတ်မတည့်ရင် မိန်းမဖြစ်သူ ပိန်သွားတာ အသားမဲသွားတယ် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ဆိုတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိပါသလား။
အိမ်ထောင်သည် အချင်းချင်း ဓာတ်မတည့်ခြင်း ဆိုတာ ဆေးပညာမှာ မရှိပါ။ ယောက်ျားကြောင့် မိန်းမကို သက်ရောက်သလို မိန်းမကနေ ယောက်ျားကိုသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ အရပ်စကားမှာတော့ မကြားဘူးဘူး။ ဆေးပညာမှတော့ ရှိပါတယ်။ အပြန်အလှန်သဘောပါ။
မိဘတွေကနေ သန္ဓေအပေါ်မှာတော့ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇ ချို့ယွင်းမှုကနေ Mutation ဆိုတာဖြစ်၊ Chromosome (ခရိုမိုဇုမ်း) အပြောင်းအလဲတွေပါ ဖြစ်ပြီး ရနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ အများကြီးပါ။ နားယဉ်လောက်မှာတွေသာ ရေးပါမယ်။ Coeliac disease, Color blindness, Cystic fibrosis, Down syndrome, Haemophilia, Polycystic kidney disease, Neurofibromatosis, Sickle-cell disease, Turner syndrome တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ ကလေးမှာ Hemolytic disease ရောဂါ ဖြစ်ရတာက ကလေးသွေးနဲ့ မအေသွေး မတည့်ကြလို့ ဖြစ်ရတယ်။
Husband and wife disease “လင်-မယား ရောဂါ” လို့ ခေါ်ကြတာတွေ တကယ်ရှိပါတယ်။ Infectious diseases ကူးစက်-ရောဂါတွေ နဲ့ Non-communicable or psychological cause ကူးစက်တာ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်း သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ကူးစက်ရောဂါ ၄ မျိုး
၁။ Genito-urinary infections မျိုးပွါးလမ်း+ဆီးလမ်း ကူးစက်ရောဂါတွေ၊
၂။ Skin diseases အရေပြားကနေ ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ ဥပမာ Flat warts ကြွက်နို့၊ Athlete's foot အားကစားသမား ခြေထောက် ခေါ်တဲ့ ဖန်းဂတ်စ် မှို ရောဂါ၊ ဝဲ-ပွေးစတာတွေ၊
၃။ Peptic ulcer (Helicobacter pylori) အစာအိမ်-လေနာ၊
၄။ Hepatitis B, AIDS and other sexually transmitted diseases လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်တာ ၅ မျိုး
၁။ Diabetes ဆီးချို၊
၂။ High blood pressure သွေးတိုး၊
၃။ Cancer ကင်ဆာ၊
၄။ Sleep insomnia အိပ်ရေးပျက်၊
၅။ Irritable bowel syndrome အစာမကျေ ဝမ်းမကောင်း ရောဂါ။
ဆေးပညာမှာ အင်္ဂလိပ်လို အင်မတန် အသုံးများတဲ့ ဝေါဟာရတခု ရှိတယ်။ Not uncommon "တွေ့နေကြ မဟုတ်တာမျိုး မဟုတ်ပါ" တဲ့။ Husband and wife disease “လင်-မယား-ရောဂါ” ဆိုတာ အဲဒီလို အမျိုးအစားဘဲ။ အိမ်ထောင်သည် ၆ဝဝ ကို ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်။ ၅၅့၎% မှာ Couple disease အတွဲရောဂါဆိုတာ လာတွေ့နေတယ်။ သုတေသနတွေ များများ လုပ်ရာကနေ ရောဂါ ၁ဝ မျိုးအထိ ရှိလာရတယ်။ ပြောခဲ့တာတွေအပြင် Alzheimer's ရောဂါ နဲ့ Kidney failure ကျောက်ကပ်-ရောဂါတွေပါ လာတယ်။
Husband and wife disease concept လင်-မယား-ရောဂါ အယူအဆကို ၁၉၇ဝ ကျော်စကတည်းက ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ အမေရိကားက Masters and Johnson ကနေစသုံးခဲ့တုံးက Sexuality famous couples လိင်ကိစ္စနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ အတွဲတွေမှာ Transmitted diseases ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ Sexual dysfunction လိင်ပိုင်းချို့ယွင်းမှုတွေကိုသာ Sick couple “ဂီလာန-စုံတွဲ” ဆိုပြီး ရေးခဲ့တယ်။
၂ဝဝ၂ ခုနှစ်က (ယူကေ) မှာရှိတဲ့ University of Nottingham က Julie Westerly Olympus Li ကနေ Husband and wife disease လင်-မယား-ရောဂါ ဆိုပြီး British Medical Journal မှာ ပဌမဆုံး ဆောင်းပါး ရေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ အမျိုးသမီး ပါမောက္ခ ရေးတာတွေထဲမှာ Diabetes ဆီးချို၊ High blood pressure သွေးတိုး၊ Ischemic heart disease နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ Asthma ပန်းနာ၊ Kidney disease ကျောက်ကပ်-ရောဂါ နဲ့ Depression စိတ်ကျ-ရောဂါတွေ ပါတယ်။
လင်-မယား နှစ်ယောက်သား အတူနေ အတူစားကြတော့ ကြာရင် Husband and wife relative သွေးသား တော်စပ်တဲ့ အမျိုးတွေလို ဖြစ်လာကြတယ်။ တနေ့ကဘဲ မိန်းကလေး တယောက်က ပြောနေသေးတယ်။ “မမေးဘဲနဲ့ ကျမကို (့) ရဲ့ မိန်းမလို့ သိတယ်” တဲ့။
ဆရာရွှေပြည်အေးရဲ့ သီချင်းထဲကလို “သွားအတူတူ၊ လာအတူတူ၊ စားအတူတူ၊ နေအတူတူ၊ အိပ်အတူတူ၊ ထိုင်အတူတူ၊ မခွဲတူနှစ်ကိုယ်၊ အမြဲမြှူချိုချို၊ အသည်း ယူတော့ဆို့” တကယ် အမျိုး မတော်ရင် အသည်းပေးလို့တော့ မရပါ။ ရောဂါတွေတော့ မျှဝေနိုင်ကြပါတယ်။
Peking University (ဘေဂျင်း) တက္ကသိုလ်၊ First Hospital of Department of Endocrinology (အင်ဒိုခရိုင်းမ်) ဌာန ဒါရိုက်တာ Professor Guo Xiaohui က ပြောတယ် “လင်နဲ့မယား ကြာတော့ စားကြလဲ အတူတူ၊ လူနေမှု ပုံစံလဲ အတူတူ ဖြစ်လေတော့ ရောဂါတွေလဲ အတူတူ ဖြစ်ကြရရော” တဲ့။
Shanghai Medical University (ရှန်ဟဲ) ဆေးတက္ကသိုလ်က Chinese Medical Association ဥက္ကဌ Yu-min ကလဲ Husband and wife cancer လင်-မယား-ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့။ နေအိမ်၊ သား-သမီး၊ အလုပ်အကိုင်၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စတာတွေကနေ အတူတူ သက်ရောက်ခံကြရလို့ပါ။ ဒီကြားထဲ ဆေးလိပ် သောက်ရင်၊ လေသန့် မရရင်၊ အစာအာဟာရ မပြည့်ဝရင် ပိုဆိုးမယ်။ ဘဝကို အနုတ်သဘော မြင်တတ်သူတွေ၊ နောက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုတွေကနေ လင်ရော မယားပါ Cancer ကင်ဆာကို ဖိတ်ခေါ်နေကြတယ်။
Urogenital infection မျိုးပွါးလမ်း+ဆီးလမ်း ကူးစက်ရောဂါတွေက လိင်လမ်းကနေ ကူးစက်တယ်။ မိန်းမကို ဆေးကုပေးလို့ ပျောက်ပြီး ပြန်ဖြစ်တာဟာ သူ့ယောက်ျား (သူ့အဖေါ်) ကနေ ပြန်ကူးစက်လာလို့ဘဲ။
Harbin Medical University (ဟာဘင်) ဆေးတက္ကသိုလ်၊ Fourth Affiliated Hospital ဆေးရုံက ပါမောက္ခ Cheng Chi-fung ပြောတာက “ကနေ့ကာလတွေမှာ Fast food အလွယ်ဝယ်-စားစရာ၊ Instant noodles ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်၊ Exercise less လေ့ကျင့်ခန်းလဲ မလုပ်၊ Stay up late ညဉ်းနက်သန်းခေါင်အထိ အလုပ်လုပ်ကြလို့ Couple of diabetes “ဆီးချို-စုံတွဲတွေ” များလာနေတယ်။ ဒါတင်မက Obesity လူတွေက ပိုဝ၊ Fatty liver အသဲက အဆီများလာ၊ အဆစ်နာ Gout ဂေါက်ရောဂါ ပိုဖြစ်ကြတယ်။”
မြက်မြက် သက်သက် စားရအောင် အိမ်မှာချက်ရင် ခပ်လေးလေး ဆိုတော့ Hypertension လင်ရော မယားပါ သွေးတိုး ကြမယ်။ လူမှုဘဝက အတူဆိုတော့ စိတ်ဖိစီးတာလဲ တူကြလို့ ပိုဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။ Sleep insomnia ဘဝတူတွေ စိတ်ခံစားမှု တူတာတွေကနေ အိပ်ယာတူပေါ်မှာ အတူအိပ်မပျော်နိုင်ကြဘူး။
ဗိုက်နာ၊ အစာမကျေ၊ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ စတာတွေကို Irritable bowel syndrome ခေါ်တယ်။ အတူ ဖြစ်ကြတတ်တယ်။ အစားအသောက်နဲ့ စိတ်ပါ ဆိုင်တယ်။ Common bad habits မကောင်းတာလေးတွေကိုလဲ အတူ လုပ်တတ်ကြတာကိုး၊ သိပ်စပ်တာ အတူကြိုက်ကြမယ်။ ကော်ဖီ ခါးခါး အတူသောက်ကြမယ်။ နှစ်ယောက်လုံး အသား လုံးဝမစားဘူး၊ စတာတွေ တူနေတတ်တယ်။ Anxiety စိုးရိမ်စိတ်ကဲတာနဲ့ Depression စိတ်ကျတာကနေ Vagus nerve (ဗေးဂတ်စ်) အာရုံကြောကို သက်ရောက်၊ Gastric acid အစာခြေရည်တွေ များရာကနေ ပြောခဲ့တဲ့ရောဂါတွေ နှစ်ယောက်သား ဖြစ်ကြရတယ်။
Peking University First Hospital ဆေးရုံက Andrology Center ကိုလာကြတဲ့ Erectile dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုး လူနာ ၁ဝဝဝ ကျော်ထဲမှာ အသက် ၃ဝ အောက်ရှိသူတွေရဲ့ ၁ဝ%၊ ၃ဝ နဲ့ ၄ဝ ကြားရှိသူတွေထဲက ၂ဝ့၆%၊ ၄ဝ-၅ဝ ကြား ရှိသူတွေထဲက ၅ဝ% ရဲ့ ဇနီးတွေမှာလဲ Sexual dysfunction လိင်ပိုင်း အားနည်းမှုတွေ ဖြစ်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။
စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူနေကြလို့ ရောဂါတူ ရနိုင်တာတွေကိုသာ ကွက်ရေးတော့ စိတ်မတူ၊ ကိုယ်မတူတာ ပိုကောင်းမယ်တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဆရာဝန်လဲ မကယ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်နေမယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:50:00 AM No comments:
သတိထားနမ်းရမည့် အနမ်းနှင့် ကျန်းမာရေး
လူတယောက်နဲ့ တယောက် mouth to mouth နမ်းရင် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။
Mouth to mouth ဆိုတဲ့ အသုံးကို နှလုံးမခုန်၊ အသက်မရှူတဲ့အခါ အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း CPR နဲ့ ဆက်ပြီး၊ ပါးစပ်ကနေ လေမှုတ်သွင်းတာကိုသာ ခေါ်တယ်။ နှုပ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို Lip kiss လို ပြောတာ များတယ်။ တရားဝင် ခေါ်ကြတာက French kiss ဖြစ်ပါတယ်။
လျှာမပါဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်းသာ နမ်းတာကို Light Kissing ခေါ်တယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသဘော။ French Kissing ကို Deep Kissing သတ်မှတ်တယ်။ အထဲထိ နက်တယ်။ French kiss နမ်းနည်းမှာ တယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ နောက်တယောက်ရဲ့ လျှာ ထိတွေ့မှု လုပ်ကြတယ်။ အဲလိုလုပ်တာကလဲ အပြန်အလှန်သဘာ ရှိရမယ်။ Slow passionate တဖြေးဖြေးချင်းနဲ့ စိတ်လိုလက်ရ ရှိရတယ်။ Intimate သိပ်ရင်းနှီးမှုလဲ ရှိရတယ်၊ Romantic စိတ်ပါလက်ပါ ဖြစ်ရတယ်၊ Erotic or sexual လိင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေမယ်။
ပြင်သစ်လို Baiser amoureux (Love kiss) ချစ်သူတွေရဲ့အနမ်း၊ Baiser avec la langue (Kiss with the tongue) လျှာနဲ့ နမ်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ အရင်တုံးက Florentine kiss လို့လဲ ခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ ဘန်းစကားနဲ့ Ice skating shoe (Galoche) လို့ခေါ်တာက အကျအန စွပ်ရ- စီးရ-လည်ပတ်စေရလို့ ထင်ပါတယ်။
Erotic kiss လိင်စိတ်-အနမ်းသဘော သက်ရောက်တာက အဖ်ါရဲ့နှုတ်ခမ်းကို အာရုံခံကောင်းလှတဲ့ လျှာနဲ့ ထိတွေ့-ကစားရလို့ ဖြစ်တယ်။ Oral zone ပါးစပ်ဝန်းကျင်ဟာ Principal erogenous zone ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ လိင်စိတ် နှိုးထစေတဲ့ ပင်မနေရာ ဖြစ်ပြီး လျှာက အထွတ်အထိပ်ကျတယ်။
Steps ဘယ်လို နမ်းကြသလဲ -
၁။ Moisten your lips အရင်ဆုံး နှုတ်ခမ်းတွေကို စိုစွပ်စေလိုက်ပါ။
၂။ Angle your face မျက်နှာကို ဒေါင့်ဖြတ်ထားလိုက်ပါ။ နှာခေါင်းထိပ်တွေကနေ အဟန့်အတား မဖြစ်စေအာင် ရှောင်ဘို့ပါ။
၃။ Close your eyes နမ်းခါနီးတုံးက တယောက်မျက်နှာ တယောက် စိုက်ကြည့်ရာကနေ မျက်လုံးတွေ ပိတ်လိုက်ပါ။ တချို့ကလဲ ခဏပိတ် လိုက်ပြီးမှ ပြန်ဖွင့်တယ်။
၄။ Start withagentle and soft closed-mouth kiss ပါးစပ်တွေ ပိတ်ထားကြပြီး၊ နုတ်ခမ်းချင်း အသာအယာ ထိတွေ့ကြပါစေ။
၅။ Go Dutch on the decision to French Kissing တယောက်တဝက် စိတ်တူသဘောတူ နမ်းကြမယ် ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရတယ်။
၆။ Explore with your tongue လျှာနဲ့ကစားပါ။ သာယာမှုကနေ စေ့ဆော်လို့ ပါးစပ်က တဖြေးဖြေး ပွင့်လာလိမ့်မယ်။ လျှာကို သူ့ပါးစပ်ထဲ အများကြီးတော့ မသွင်းပါနဲ့။
၇။ Go slow စိတ်ရှည် ဖြေးလေး အချိန်ပေးပါ။
၈။ Breathe အသက်ရှူဘို့ မမေ့ပါနဲ့။
၉။ Mix it up ပါးစပ်-နှုတ်ခမ်း-လျှာတွေ ရောနှောသွားကြပါစေ။
၁ဝ။ Use your hands အစမှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ငြိမ်ငြိမ်လေး ထားခဲ့တဲ့ လက်တွေက အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီ။
၁၁။ Read your partner's body language ပါးစပ်က မပြောပေမဲ့ ကိုယ်အမူအရာကပြတဲ့ အဖေါ်ရဲ့စိတ်ကို သဘောပေါက်ပါ။ Good kisser နဲ့ Bad kisser မတူတာက တဖက်သားရဲ့ Body language ဒီ (ဘော်ဒီ-လဲန်ဂွေ့ခ်ျ) ကို နားလည်ပြီး နာလည်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ ရှိထားသူတွေကနေ (ရှယ်) ကြတာတွေ ရှိပါတယ်-
- နမ်းနည်းဆိုတာ သင်ပြစရာ မလိုဘူး။ သူ့ဖါသာ နားလည်လာကြတာပါ။
- Don't saliva too much သွားရည် သိပ်မများအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
- Just massage her tongue with yours လျှာကို လျှာနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးသလိုသာ လုပ်ပါ။
- Follow her lead if she wants to မိန်းကလေးကို ရှေ့ကပြေးပါစေ။
- My boyfriend likes it when I move my tounge inacircular motion ကျမရည်းစားက ကျမလျှာကို စက်ဝိုင်းလည်သလို လုပ်ပေးတာကို သိပ်သဘောကျတယ်ရှင့်။
တာဝန်အရ သတိပေးပါရစေ -
• Light kissing ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နမ်းတာနဲ့ကို Herpes ရေယုံနဲ့ Scabies ဝဲ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ထိစပ်တဲ့နေရာ (ပါးစပ်နားတဝှိုက်) မယ် ရောဂါမရှိသူမှာ အပေါက်အပြဲ အနာအဆာ ရှိမှသာ ကူးမှာပါ။
• တီဘီ (သလိပ်ထဲ ပိုးတွေ့)၊ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိဖြစ်နေသူက နမ်းတာ မခံပါနဲ့။
• Ugly, dripping, oozing, puss-filled sores မြင်သာတဲ့ မန်းရည်လို၊ ပြည်လိုအနာရှိနေသူကို သွားမနမ်းပါနဲ့။ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ Deep kissing လုပ်မိရင် ကူးစက်ဘို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများမယ်။
• Sexually transmitted diseases လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Herpes Simplex Virus-2 ရေယုံ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအား (၂)၊ Hepatitis B အသဲရောင် ဘီ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ Syphilis ဆစ်ဖလစ် ရောဂါတွေ ကူးနိုင်တယ်။
• အဖေါ်အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိရင် အန္ကရာယ်နဲ့ မကစားတာ ကောင်းတယ်။
နောက်တခုလဲ သတိပေးအုံးမယ်။ ငယ်တုံးရွယ်တုံးမှာ French kissing ကို အဖေါ်တွေ အများကြီးနဲ့ လုပ်ခဲ့သူဟာ Significantly increase the risk of meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါ ရစေဘို့ ပိုပြီးနီးစပ်တယ်လို့ သုတေသန တခုက ဆိုပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:49:00 AM No comments:
လန်ဒန်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ စိတ်ပညာ ပါမောက္ခ ဦးစီးလို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုအရ ဖြစ်ပါတယ်။ Relation တစ်ခု ပြီးစုံ သွားတဲ့ အခါတိုင်း ချစ်သူနဲ့ ပြတ်ဆဲ သွားတဲ့ အခါတိုင်း အမှန်တကယ် အခံစားရဆုံးက အမျိုးသားဘက်က ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
အပေါ်ယံမှာ အမျိုးသမီးများက ပိုမို ခံစားရတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တော့ အမျိုးသမီးများက မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပြန်လည် ဖြေသိမ့် နိုင် ပါတယ်။ အချို့ ဆိုရင် နောက်ထပ် Relation တစ်ခုကို အချိန်သိပ်မကြာပဲ နဲ့တောင် ထပ်မံ စတင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ အမျိုးသား အများစု အနေနဲ့ ကတော့ ချစ်သူနဲ့ ပြတ်ဆဲတိုင်း စိတ်ဝေဒနာ ခံစားရပြီး ရင်ကွဲနာ ကျတဲ့ အချိန်က ပိုမို ကြာမြင့်တတ် ပါတယ်။ ယင်းကာလ အတွင်း အခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ အမျိုးသမီးနဲ့ သာမန်လူများထက် လျော့ကျ တတ်ပါတယ်။
အချို့ အမျိုးသားဆိုရင် အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများနဲ့ ဆက်ဆံရေး ရော့ရဲ တဲ့ အထိ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသား များအဟာ အသဲကွဲရင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို ထိရှ ခံစားလွယ်ကြောင်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြ ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:43:00 AM No comments:
Pregnancy Signs ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း လက္ခဏာ (၂ဝ)
(၁) ဖြစ်တဲ့သူ အသက်က 36 ပါဆရာ။ နောက်ဆုံးရာသီလာတဲ့နေ့က 15.2.2014 ပါဆရာ။ နောက်ဆုံး အတူနေတဲ့ရက်က 20.1.2014 ပါ။ အခု 20.3.2014 ကစပြီး အဖြူတွေပဲ ဆင်းနေပါတယ်တဲ့ ဆရာ။ သူအခုရောက်နေတဲ့ နေရာ့့ မှာက အင်တာနက်တခုပဲ ရလို့ပါဆရာ။ ဆီးစစ်တံလဲ မလွယ်လို့ပါတဲ့ ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဆရာ။
(၂) ရာသီမလာခင်တစ်ရက် ကိုယ်ဝန်စစ်တော့ မရှိပါ။ အခု ရာသီလာမဲ့ရက်ထက် သုံးရက်လောက် ကျော်နေပါပြီ။ မစစ်ရဲသေးလို့ပါ။ ကိုယ်က ကိုယ်ဝန်လိုချင်တာဆိုတော့ မရှိရင် ငိုမိမှာစိုးလို့ပါ။ ရင်သားတွေကတော့ အရမ်းနာကျင်ပါတယ်။ အဖြူကလည်း တော်တော်ဆင်းပါတယ်။ အဲဒါ ရာသီနောက်ကျတာပါလားရှင်။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း လက္ခဏာတွေကို တချို့မှာ ဘာမှမခံစားရဘူး။ တချို့ကြ လူမမာကြီးလို အတော်ခံစားရတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း လက္ခဏာ (၂ဝ)
၁။ ရာသီမလာတော့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးသား မျိုးဥက သားအိမ် အတွင်းဆုံးလွှာကို လာပြီးတွယ်ကပ်ချိန်မှာ သွေးနဲနဲ စွန်းမယ်။ ဆီးစပ်နေရာကလဲ နာတာခံစားရနိုင်တယ်။ ရာသီလာလို့နာတာနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။ မျိုးဥထွက်ချိန်ဆိုတာ (လလည်ရက်) နဲ့ ၆-၁ဝ ရက်မှာဖြစ်တယ်။
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ထင်ခြင်း၊
၃။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အစားမစားချင်ဖြစ်လာခြင်း၊
၄။ အတူနေချင်စိတ် ပြောင်းလဲလာခြင်း၊
၆။ ရင်သား ပိုကြီးထွားလာခြင်း၊
၇။ ရင်သား အရောင်ရင့်အဝိုင်းမှာ အသီးငယ်လေးတွေ ထွက်လာခြင်း၊ ရှိပြီးသားတွေက ပိုပြီးသိသာလာခြင်း၊
၈။ ညှစ်ရင် နို့ရည်ကြည် နဲနဲထွက်နိုင်ခြင်း၊
၉။ ဆီးခဏခဏသွားရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အများစုက ၆-၈ ပါတ်မှာ ဖြစ်ကြတယ်။ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ၊ ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးတွေကြောင့်လဲ အဲလို ဆီးခဏခဏသွားချင်တာနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။
၁၃။ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင် ခေါင်းမူးမယ်၊ သတိလစ်ချင်သလိုဖြစ်မယ်။
၁၄။ ဆီး-သွေးစစ်လျှင် အပေါင်းပြခြင်း၊
၁၅။ ဗိုက်ထဲက ကလေးလှုတ်တာကိုသိနေခြင်း အများဆုံးက ၂ဝ ပါတ်ကျော်မှသာ သိတယ်။၊ ၁၃-၂၅ ပါတ်အထိလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၁၆။ ဗိုက်ကြော စသည်ပြတ်ခြင်း (နောက်ပိုင်းမှသာဖြစ်တယ်)၊
၁၇။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရင် မြင်ရခြင်း၊
၁၈။ (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်လျှင်တွေ့ရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ၄ ပါတ်ခွဲမှာ Gestational sac မြင်ရပြီ။ Yolk sac ကို ၅ ပါတ်၊ Embryo ကို ၅ ပါတ်ခွဲမှာမြင်ရပြီ။
၁၉။ ကလေးနှလုံးခုန်သံ နားထောင်၍ရခြင်း၊ Doppler ကရိယာနဲ့နားထောင်ရင် ၈-၁ဝ ပါတ်အထိ မကြားနိုင်သေးပါ။ ၁၂-၁၄ ပါတ်ရောက်မှသာ ကြားရတာများတယ်။ စကြားရချိန်မယ် တမိနစ်ကို ၁၈ဝ အထိမြန်တယ်။ နောက်ပိုင်း ပုံမှန် ၁၂ဝ-၁၆ဝ အထိရှိတယ်။ (အာလ်ထွာဆောင်း) နဲ့စမ်းရင် ၆ ပါတ်မှာ ၉ဝ-၁၁ဝ၊ ၉ ပါတ်မှာ ၁၄ဝ-၁၇ဝ၊
၂ဝ။ သားအိမ်ကြီးလာခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်ကစပြီး ဆီးစပ်နေရာကနေ သားအိမ်အမြင့်ကို လက်နဲ့စမ်းလို့ရပြီ။
သိပ်မသိသာတဲ့၊ လူတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မဲ့ အချက်တွေကတော့ -
ခေါင်းကိုက်တာ၊ စိတ်မူပြောင်းခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ (ဒီအချက်တွေဟာ ရာသီမလာခင်ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ အတူတူဖြစ်တယ်။) ဝမ်းချုပ်တာ Progesterone ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဟော်မုန်းက အစာကိုအောက်ဆင်းတာ နှေးစေတယ်။ (ဗဂျိုင်းနား) နံရံတွေက ပိုထူလာတယ်။ (ဗဂျိုင်းနား) ပိုပြီးစိုတာ၊ ဖြူတဲ့ နို့လိုဆင်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ကာလ တလျှောက်လုံးမှာလဲ အဲလိုရှိနေနိုင်တယ်။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။ ဒါပေမဲ့ အနံ့ဆိုးလာရင်၊ ယားယံလာရင်၊ ဆင်းတာက အရောင် ပြောင်းလာရင်တော့ ဆေးစစ်ပြီး ကူသမှုခံယူရမယ်။
Urine Pregnancy Test ဆီးစစ်နည်းကို သိပ်စောစောစမ်းရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပေမဲ့ အနုတ်ပြနိုင်တယ်။ ရာသီလာရမဲ့ရက်ထက် တပါတ်နေလို့ မလာသေးရင် စမ်းပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမယ်ထင်ပေမဲ့ အနုတ်ပြနေရင် နောက်တပါတ် အကြာမှာ တခါထပ်စမ်းပါ။ မနက်ခင်းသွားဆီးကို စစ်ပါ။ ရေလဲ မသောက်သေးဘဲ ၄ နာရီလောက် ဆီးအောင့်ထားပြီး သွားတဲ့ဆီးလဲ ရတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၄-၅ ပတ်ရှိနေသူဆိုရင် ဘယ်အချိန်သွားတဲ့ဆီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။
ဆီးစစ်ရမဲ့ရက်ဆိုတာ မ-မျိုးဥထွက်ချိန် (လလည်ရက်) ရဲ့နောက် ၆-၁၂ ရက်မှာဖြစ်တယ်။ ဒိထက်စောပြီး ဘယ်နည်းနဲ့ စမ်းစမ်း မသိနိုင်ဘူး။ မ-မျိုးဥက ပုံမှန် ၁၄ ရက်မှာ ထွက်ပေမဲ့ နောက်ကျနေသူတွေဆိုရင် မတူနိုင်ဘူး။ ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းတယ်ဆိုတာ တိကျဘို့ရာ ဘယ်ရက်မှာ အတူနေခဲ့သလဲဆိုတာထက် ဘယ်ရက်မှာ မျိုးဥထွက်သလဲက အရေးပါတယ်။
သုက်ပိုးတွေက ပုံမှန်ဆိုရင် သားအိမ်ပြွန်ထဲမှာ မျိုးဥထွက်အလာကို စောင့်နေရင်း ၅ ရက်အထိ ရှင်နေနိုင်တယ်။ သားအိမ် အတွင်းလွှာမှာ လာတွယ်ကပ်ဘို့ နောက်ထပ် ၁၂ ရက်ကြာစောင့်ရသေးတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘယ်လောက်တိကျတဲ့ နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သုက်ပိုးဝင်လာပြီးနောက် (၅ + ၁၂ = ၁၇) ရက်ထက်စောပြီး မသိနိုင်ဘူး။ တချို့စမ်းသပ်နည်းက hCG ဟော်မုန်း (100 mIU/mL) ရှိရင်စမ်းလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ၃-၄ ရက် စောင့်ရပြန်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ ၃ ပါတ် (၂၁ ရက်) အတွင်းစမ်းရင် မမှန်တဲ့ အနုတ် ပြနိုင်တယ်။
Blood pregnancy tests သွေးစစ်နည်းကိုလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ဆီးစစ်တာထက် ပိုသေခြာတယ်။ အရည်အသွေးရော အရေအတွက်ပါ စမ်းနိုင်တယ်။ ယေဘုယျ ပြောရရင် hCG ဟော်မုန်းက ကိုယ်ဝန်ရှိစ လတွေမှာ တရက်နဲ့ တရက် ဆတိုး များများလာတယ်။ ၄၈ နာရီခြား သွေးစစ်နေရင် ကိုယ်ဝန်ရဲ့အခြေအနေကို မှန်းလို့ပိုကောင်းမယ်။ ဆိုပါစို့ ကိုယ်ဝန်က ကောင်းပြီး ရင့်ရင့်လာတာ၊ ပျက်ချင်တာနဲ့ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ၊ အမွှာဖြစ်နေတာတွေ ခွဲသိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်ဘို့ လူတိုင်း မလိုပါ။
Quantitative blood tests ဟော်မုန်းအနည်း-အများကို စမ်းတဲ့သွေးစစ်နည်းကတော့ မျိုးစပ်ပြီးသား သန္ဓေက သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာကို လာကပ်ပြီဆိုတာနဲ့ သိနိုင်တယ်။
ရာသီလဲ မလာ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လဲထင်ရင် ဆီးစစ်ပေမဲ့ အပေါင်းမပြရင် ၂-၃-၄ ရက် စောင့်ပြီး ထပ်စစ်ပါ။ တချို့ဆေးညွှန်းတွေက ၇ ရက်တပတ် စောင့်ခိုင်းတယ်။ ၇ ရက်အကြာ တခါထပ်စစ်လို့ အနုတ် ဖြစ်နေမယ်၊ ရာသီလဲ မလာသေးရင် ဆရာဝန်က စမ်းဘို့ လိုမယ်။ (အာလ်ထွာင်းဆောင်း) ရိုက်ချင်ရိုက်မယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:35:00 AM No comments:
"ညက လုံးဝအိပ်လို့ မရဘူးဗျာ"
"ဘာလဲ... သူက ကုတင်ကြီးပါ မ,သွားလို့လား?"
ကျောင်းအုပ်ကြီးက မောင်ကျေးညိုလေးကို စစ်မေးနေတယ်... ...
"ဘာလို့ မင်းအတန်းပိုင်ဆရာမရဲ့ ထိုင်ခုံပေါ်ကို ဖားတစ်ကောင်သွားတင်ရတာလဲ"
3. ကြောက်တတ်တဲ့ ဖေဖေ
"မေမေ... ဖေဖေက လမ်းကူးရင် ကြောက်တတ်တယ်နဲ့ တူတယ်"
"လမ်းကူးတိုင်း ကျနော့်လက်ကို ဆွဲဆွဲထားလို့"
ကျေးညိုတို့ ဘကြီးရဲ့ ခြေထောက် ဘယ်လောက်တောင် ကြီးလဲဆိုရင်... ...
ရေလွှာလှိုင်းစီးတာ ဘုတ်ပြားမလိုဘူး... တဲ့။
5. လတ်ဆတ်တဲ့ ဆိုင်
ကျနော်တို့မြို့ ထမင်းဆိုင်က ဟင်းတွေ ဘယ်လောက်တောင် လတ်ဆတ်လဲဆိုရင်...
ဝပ်ကျင်းထဲက ကြက်မကြီးနဲ့ ဒယ်အိုးတစ်လုံး ယူလာပေးတယ်။
ကြက်မဖင်က ကြက်ဥထွက်ကျလာနဲ့ တန်းကြော်ရုံပဲ
စိတ်ပညာဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတစ်ခု အလိုအရ...
'အလှအပဟာ ဒေါသကို ပြေပျောက်စေတယ်'... တဲ့။
အိမ်က မိန်းမကြီးကိုမြင်တိုင်း ဒေါသအလိပ်လိုက်ထွက်တာ...
ကျနော်တို့ လူမှုဝန်ထမ်းရုံးမှာ 'ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်း' အစီအစဉ်အတွက် အကောင်းဆုံး အကြံပေးနိုင်သူကို ဆုတော်ငွေ ၁ သိန်း၊ ချီးမြင့်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တယ်။
ဆုတော်ငွေကို ၁ သောင်းသာ ချီးမြင့်သင့်တဲ့အကြောင်း အကြံပြုတဲ့သူက ပထမဆု ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက် တီဗွီကလာတဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်နေတယ်။
ယောက်ျားက ပြောတယ်... ...
"ခြေကျသွားတဲ့ ဘောလုံးသမားကို လူစားလဲသလိုမျိုး၊ အသက်ကြီးလာတဲ့ မိန်းမတွေကိုလည်း လူစားလဲလို့ရရင် ကောင်းမယ်"
ဒီတော့ မိန်းမကလည်း ပြန်ပြောတယ်... ...
"ညစ်ပတ်တဲ့ ဘောလုံးသမားကို အနီကဒ်ပြပြီး ပွဲကအပြီးအပိုင်ထုတ်လိုက်သလိုမျိုး၊ ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောက်ျားတွေကိုလည်း မိသားစုထဲက ထုတ်ပစ်လို့ရရင် ကောင်းမယ်"
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:34:00 AM No comments:
စိတ်ညစ်နေရင် (သို့မဟုတ်)ဒေါသထွက်နေရင် ဒါတွေလုပ်ပါ
၁) သင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကို လက်ခံလိုက်ပါ... သင်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲနိုင်တယ် ပြီးတော့ ပြောင်းလဲချင်စိတ်လဲရှိတယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ...
၂) သင့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေ သင့်စိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို လက်လွှတ်လိုက်ပါ... သူတို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာ သင်သိပြီးသားပဲ...
၃) သင်အကြိုက်ဆုံး မြူးမြူးကြွကြွတေးသီချင်းတွေ ဖွင့်ပြီး ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ပါ... ရင်ကိုဖွင့်ပြီး အားရပါးရလိုက်ဆိုပါ... တေးသွားနဲ့ အလိုက်သင့်ကခုန်လိုက်ပါ....
၄) ပြေးပါ... ခပ်ဝေးဝေးကို ပြေးပါ... သင့်စိတ်ထဲ သက်တောင့်သက်သာရှိလာတဲ့ အထိပြေးပါ... နောက်ဆုံးမှာ စိတ်ခံစားချက်တွေ အရေးမပါတော့တဲ့အထိ သင်မောပန်းလာပါလိမ့်မယ်...
၅) သင်ချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်ဆီဖုန်းဆက်လိုက်ပါ... သူတို့ရဲ့ အသံတွေကို ကြားရတဲ့အခါ သင်နေလို့ထိုင်လို့ ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်....
၆) လူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြုံးပြလိုက်ပါ... ဒီနည်းက သင်တို့နှစ်ယောက်လုံး ပြုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...
၇) တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို အမည်မဖော်တဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလွှာလေး ပို့ပေးလိုက်ပါ...
၈) သင့်ကိုယ်သင် မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကို ချရေးလိုက်ပါ... ပြီးရင် အဲ့ဒါကို စုတ်ဖြဲပြီး မီးရှို့လိုက်ပါ...
၉) သင်အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားကားကို ထိုင်ကြည့်လိုက်ပါ....
၁၀) သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်ပါ...
Credit: Myanmar CNN
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/31/2014 07:32:00 AM No comments:
★မြစ်တွေရဲ့ သဘောတစ်ခုက ကိုယ်စီးဝင်လာတဲ့ ရေတွေအပေါ်တင်းတိမ်ရောင့်ရဲမှုမရှိခြင်းပါပဲ။ လျှိုမြောင်စိမ့်စမ်း အသွယ်သွယ်ချောင်းငယ် ချောင်းကြီး အသီးသီးက ရေတွေဘယ်လောက်ပဲ
စီးဝင်လာ စီးဝင်လာ "ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီလို့ မလာကြပါနဲ့တော့" လို့အားရကျေနပ်သွားတယ်ဆိုတာ မြစ်မှာမရှိဘူး။ရေအပေါ် အလို မပြည့်နိုင်တာမြစ်ရဲ့ သဘောပါ။
★မြစ်နဲ့တူတဲ့ တဏှာဟာလည်း လိုချင်စရာ အာရုံတွေအပေါ် ဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ပါဘူး။ လိုပြီးရင်း လိုချင်ရင်း ၊ရပြီးရင်း ရချင်ရင်း ပါပဲ။"ဒီတစ်ခုရရင်တော့ ကျေနပ်ပြီ "
လို့မရခင်မှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်လည်းရလာရောနောက်ထပ်တစ်ခု ထပ်လိုချင်ပြန်ပါတယ်။
"တစ်ကြိမ်လောက်ခံစားခွင်ရရင့် သေပျော်ပါပြီလို့ " မခံစားရခင်မှာ စိတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်လည်း ခံစားရရော "နောက်တစ်ကြိမ်" "နောက်တစ်ကြိမ်"နဲ့ စိတ်မပြတ်နိုင်အောင် ခံစားချင်စိတ်တွေ
တိုးတိုးလာပါတယ်။တဏှာရဲ့ အလိုဟာ ပြည့်တယ်ရယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မရှိဘူး။
★မြစ်နဲ့တူတဲ့ တဏှာဟာလည်း ဟန်ဆောင်မှု လှည့်ဖြားမှု တွေနဲ့ အမတန် ကောက်ကွေ့လှပါတယ်။ တဏှာလောက်ကလိမ် ကကျစ် များတဲ့ ကိလေသာ တဏှာလောက် တစ်ပတ်ရိုက်
ကျွှမ်းတဲ့ ကိလေသာ တစ်ခုမျှ မရှိဘူး။ "မာယာတစ်သိန်း အပလိန်းအန္တ"
ဆိုတာ တဏှာရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ပါပဲ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2014 08:53:00 AM No comments:
အကြမ်းဖက် ဂိမ်းတွေကြောင့် ရန်လိုတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာ
ကလေးတွေဟာ အကြမ်းဖက် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကြောင့် ရန်လိုတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာ
ကလေးတွေ အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ရန်လိုတဲ့ အမူအကျင့်တွေဖြစ်စေဖို့ အကြမ်းဖက် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဟာ သွေးထိုးပေးတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်သစ်တစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကို အဖန်တလဲလဲ ဆော့တဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့နဲ့ကပ်ညှိသွားမယ့် အတွေးပုံစံတွေကို သင်ယူလေ့လာနေရာရောက်ပြီး အရွယ်ရလာလေ အမူအကျင့်တွေကို စိုးမိုးလာလေပါပဲ။
အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ၊ ယဉ်ကျေးမှုမရွေး ဒီသက်ရောက်မှုဟာ အကျုံးဝင်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုရဲ့ ဦးဆောင် စာတမ်းပြုသူ၊ စိတ္တဗေဒ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Douglas ရဲ့ ပြောကြားချက်အရဆိုရင် ဗီဒီယိုဂိမ်းဆော့တုန်း လုပ်ဆောင်တဲ့ ဦးနှောက်ဖြစ်စဉ်ဟာ သင်္ချာသင်တာ၊ စန္ဒယားတီးတာ တွေနဲ့ ဘာမျှကွာခြားမှု မရှိပါဘူး။
‘ထပ်ကာ၊ ထပ်ကာ လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်၊ မင်းခေါင်းထဲမှာ အဲ့ဒီ့ သုတတွေ ရလာရော။ စန္ဒယားကို နှစ်ကြာလာတဲ့အထိ မတီးဖြစ်တော့တာဟာ တစ်ခုခု မတီးနိုင်တော့ဘူးလို့ မဆိုလိုဘူး။ (ငယ်ငယ်တုန်းက ဆော့ခဲ့တဲ့ အစွဲတွေက ကြီးလာတဲ့အခါ ပျောက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။)အကြမ်းဖက်ဂိမ်းတွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ ကိုယ့်ရန်သူတွေအပေါ် နိုးနိုးကြားကြားရှိခဲ့ရတယ်လေ။ ရန်သူတွေကို မာန်ပါပါနဲ့ တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရာမှာ မညှာမတာတတ်အောင် လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာ။’ လို့ ပါမောက္ခ Gentile ကပြောပါတယ်။
အကြမ်းဖက် ဂိမ်းတွေ ဆော့လို့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကြမ်းတမ်းတာဟာ မိန်းကလေးတွေထက် ယောကျာ်းလေးတွေဟာ အဖြစ်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂတ်(စ်)နဲ့ချက်ရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိပါသလဲ ဆရာ။
• Natural gas သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှာ methane နဲ့ ethane တွေပါတယ်။ ပိုပေါ့တယ်။
• Liquefied petroleum gas (LPG) အပြင် GPL, LP Gas လို့လဲခေါ်တယ်။ propane or butane ဓါတ်ငွေ့တွေ ဖြစ်တယ်။ မီးဖိုအတွက်သာမက ယာဉ်မောင်းရာမှာလဲ သုံးနိုင်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာမှာသုံးနေတဲ့ CCF က အိုဇုန်းလွှာကို ပါးစေတာမို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုလို့ သူ့အစား aerosol propellant ကိုသုံးလာတယ်။
• LPG ဓါတ်ငွေ့က fossil fuels ကနေရတယ်။ မီးရှို့ရင် ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့လို့ခေါ်တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ထွက်တယ်။
• Compressed natural gas (CNG) ကို ကားတွေမှာ အများဆုံးသုံးတယ်။ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်အတွက် အများကြီး သက်သာစေတယ်။
Gas Vs Electric Ranges ဓါတ်ငွေ့မီးဖိုနဲ့ လျှပ်စစ်မီးဖို
ဓါတ်ငွေ့မီးဖို ကောင်းနည်းချက်များ = ဈေးချိုတယ်။ အိုးကို အောက်ခြေ၊ ဘေးနဲ့ အပေါ်ပိုင်းအထိ အပူအညီအမျှပေးတယ်။ မီးတောက်ကိုထိန်ညှိလို့ရတယ်။ ပိတ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလိုအေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝန်ကျယ်တယ်။ ထားသိုစရာ နေရာယူတယ်။ အန္တရာယ်ပိုများတယ်။ ဓါတ်ငွေ့အိုး၊ ပိုင်စတာတွေကနေ ယိုစိမ့်နေနိုင်တယ်။ ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်။ ပိုက်နဲ့လာဆိုလဲ ပိုက်ပေါက်တာ၊ စိမ့်ထွက်တာ သတိကြီးရမယ်။ အငွေ့ယိုတာက အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့ ဖြစ်တယ်။ လူတွေရော အိမ်မွေးအကောင်တွေပါ သတိထားရမယ်။ အိုဗင်မှာလို အပေါ်အထိ အပူလိုတာ မရနိုင်လို့ ဖုတ်လို့မသင့်ဘူး။ ထွက်တဲ့ အပူကနေ ရေငွေ့ပါလို့ လေမှာ စိုထိုင်းမှုများနေမယ်။ ရို့စ်လုပ်လို့သိပ်မကောင်းဘူး။
လျှပ်စစ်မီးဖို ကောင်းချက်များ = ဈေးမကြီးပါ။ မီးပလပ်တပ်ပြီး ခလုတ်နှိပ်ယုံဘဲမို့ လွယ်တယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာလဲ လွယ်တယ်။ ကျော်လှော်ချက်ပြုတ်မဲ့ ကျောအိုတင်ရတာလဲ ငြိမ်တယ်။ မီအပူကလဲ တသမတ်တည်းရှိတယ်။ မီးခြစ်ပုံးတို့ မီညှိစရာကိရိယာတို့ မလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ မီးမလာရင် ဘာမှလုပ်မရ၊ မီးပိတ်လိုက်ပြီး အေးဘို့ စောင့်ရတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2014 08:47:00 AM No comments:
ATM ကဒ်ဖြင့် အလွယ် တကူငွေထုတ်နည်းလေး
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်အမြောက်အများကို နိုင်ငံတော်မှ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေး ပြီးနောက်ပိုင်း တွင်ကျယ်လာသော
ငွေကြေး ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မူကို သူသူ ငါငါ အပြိုင် အဆိုင်လုပ်ကိုင်လာကြရာတွင် ATM ကဒ်သည် တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
မိမိအပါအ၀င် နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆိုပါ ကဒ်သုံးငွေကြေးထုတ်ယူမူ စနစ်များဖြင့် အတော့်ကို အလှမ်းကွာဝေးခဲ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့်
စာဖတ်သူ မိဘပြည်သူအများ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပထမဦး ဆုံး ( Welcome Screen )ကြိုဆိုပါ၏ စာသားကိုမြင်ရသော အခါတွင် ကဒ်ကိုထည့်သွင်းရန်ပြထားပါမည်။
(၂) မိမိ၏ ကဒ်တွင်ပါရှိသော မြှားပုံပါအတိုင်း ထည့်သွင်းရမည်။
(၃) အင်္ဂလိပ် / မြန်မာ နှစ်ဘာသာ အနက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပါ။
(၄) ဘာသာစကား ရွေးပြီးပါက ( Personal Identification Number - PIN NO )ရိုက်ထည့်ပါ။
(၅) PIN NO ရိုက်ထည့်ပြီးပါက ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းရ ပါမည်။
ထို့နောက် မိမိလုပ်ဆောင်လိုသော လုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ပေး ရပါမည်။
(က) ငွေထုတ်ယူလိုပါက ( ငွေထုတ်ယူမည်) ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
(ခ) ငွေလက်ကျန်သိလိုပါက ( ငွေလက်ကျန်ကြည့်ရူမည် ) ကိုရွေးပေးပါ။
(ဂ) ငွေလွှဲပြောင်း မည်ဆိုပါက ( ငွေလွှဲပြောင်းမည် ) ကိုရွေးပေးရမည်။
(ဃ) မိမိကဒ်၏ PIN NO ပြောင်းလိုပါက ( PIN နံပါတ် ပြောင်းမည် ) ကိုရွေးပေးရမည်။
(င) မိမိကဒ်၏ အကြောင်းအချက်အလက်ကို သိလိုပါက ( Mini Statement ) ကိုရွေးလိုက်ပါ။
(၆) ငွေထုတ်ယူ မည်ကိုရွေးချယ် ခဲ့သည်ဖြစ်ပါက ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ငွေပမာဏ ဥပမာ။ ။ ၅၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀... စသည့်ဖြင့် ရွေးလိုက်နိုင်သလို
မိမိ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုပါက ( အခြား) ဟူသော စာသားကို ရွေးပြီး မိမိထုတ်ယူလိုသော ပမာဏကို ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်.။
(၇) မိမိထုတ်ယူလိုသော ငွေသားပမာဏကို ရွေးပြီးပါက ခေတ္တစောင့်ဆိုင်း ရမှာဖြစ်ကာ များမကြာမှိ သင့်ငွေသားများ စက်အတွင်းမှ ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
(၈) ငွေသားလက်ခံ ပြေစာကို ရယူလိုပါက ( သဘောတူပါသည်) ကိုရွေးပေး လိုက်ခြင်းဖြင့် စလစ်ကလေးတစ်ခု ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
(၉) အခြား သောဝန်ဆောင်မူများကိုဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်လို တော့ပါက (မပြုလုပ်ပါ) ကိုရွေးချယ် လိုက်ပါ။ ထို့နောက် သင့်၏ ATM ကဒ်ထွက်လာ ပါလိမ့်မည်။
သတိပြုရန်အချက်။ ။ ( မိမိကဒ် အားသတ်မှတ်ထားသော (၁) မိနစ်အတွင်း မထုတ်ယူမိပါက စက်မှ အလိုအလျေက် ကဒ်ကို သိမ်းယူသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သတိပြုစေခြင်ပါသည်။ )
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်မူများသည် CB Bank ATM ကဒ် စနစ်သုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အခြားသော ဘဏ်များ၏ လုပ်ဆောင်မူများမှာလည်း အလားတူ ဖြစ်ကာ ထင်သာမြင်သာလောက်အောင်
ကချင်း (MM Social Sky )
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2014 08:45:00 AM No comments:
ရိုးရာခေါင်ရည် သောက်ရင်ရော အတူတူဘဲလားဆရာ။
• Ethanol (အက်သနော) Ethyl alcohol (အီသိုင်း အယ်လ်ကိုဟော) ပါတာကို သောက်စရာအရက်လို့ခေါ်တယ်။ တချို့ထဲမှာ တခြား Alcohols (အယ်လ်ကိုဟော) တွေပါတာလဲရှိတယ်။
• ဓါတုဗေဒအရခွဲခြားထားသလို အခွန်ကောက်ဘို့ ခွဲထားတာ (၃) မျိုးလဲရှိတယ်။ (၁) Beers ဘီယာ၊ (၂) Wines ဝိုင် နဲ့ (၃) Spirits (စပစ်ရစ်) ဖြစ်တယ်။
• နောက်ခွဲခြားနည်းတမျိုးကတော့ အသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းနဲ့ ထုတ်လုပ်နည်း အဆင့်အရ ခွဲထားတာဖြစ်တယ်။ အဆင့်ခွဲတာမှာ (၂) မျိုးရှိတယ်။ (က) Fermented beverages အချဉ်ဖေါက်နည်း နဲ့ (ခ) Distilled beverages ပေါင်းခံရည်ဖြစ်တယ်။
• Fermentation အချဉ်ဖေါက်နည်းဆိုတာ သကြားကနေ Yeasts တဆေးကိုသုံးပြီး၊
• Ethanol (အက်သနော) နဲ့ (ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်) ကိုပြောင်းပေးနည်းဖြစ်တယ်။ သကြား 10 kg ကနေ အက်သနော 6.5 L (5.1 kg) နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် 4.9 kg (4900L) ရမယ်။ သီအိုရီအရ ပြောတာပါ။ Energy စွမ်းအင် (2.6 MJ/kg of ethanol) လဲရမယ်။
• Yeasts တဆေးဆိုတာ ဆဲလ်တခုထဲပါတဲ့ Fungus ဖန်းဂတ်စ် (မှို) ဖြစ်တယ်။
အရက်ချက်ရာမှာ ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးသုံးတယ်။ (က) Fermented beverage အချဉ်ဖေါက်အရက်တွေနဲ့ (ခ) Distilled beverage ပေါင်းခံရည်အရက်တွေ ရတယ်။
• Barley ဘာလီစေ့ကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် ale, barley wine တွေနဲ့ ပေါင်းခံရည်အရက် Scotch whisky, Irish whiskey, shōchū တွေထုတ်တယ်။
• Rye ရိုင်းစပါးကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် rye beer, kvass တွေနဲ့ ပေါင်းခံရည်အရက် rye whiskey, vodka, Korn တွေထုတ်တယ်။
• Corn ပြောင်းစေ့ကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် chicha, corn beer, tesguino တွေနဲ့ ပေါင်းခံရည်အရက် Bourbon whiskey; and vodka တွေထုတ်တယ်။
• Sorghum ကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် burukutu, pito, merisa, bilibili တွေနဲ့ ပေါင်းခံရည်အရက် maotai, gaoliang, baijiu တွေထုတ်တယ်။
• ဂျုံစေ့ကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် wheat beer နဲ့ ပေါင်းခံရည်အရက် horilka, vodka, wheat whiskey, weizenkorn တွေထုတ်တယ်။
• ဆန်စေ့ကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် beer, brem, huangjiu and choujiu, Ruou gao, sake တွေနဲ့ ပေါင်းခံရည်အရက် sonti, makgeolli, chungju, tuak, thwon, aila, rice baijiu, shōchū, awamori, soju တွေထုတ်တယ်။
• Millet ကနေ အချဉ်ဖေါက်အရက် millet beer, tongba, boza တွေထုတ်တယ်။
သစ်သီးတွေကနေထုတ်တဲ့ အရက်တွေရှိတယ်။ စပျစ်သီးကနေ ဝိုင်၊ ဘရန်ဒီနဲ့ ကော့ညက် စတာတွေ ထုတ်တယ်။ ပန်းသီးကနေ Cider ထုတ်တယ်။ သစ်တော်သီး၊ ဆီးသီး၊ ဘယ်ရီသီး၊ နာနတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီး၊ ချင်း (ဂျင်း)၊ စတဲ့အသီးတွေကနေ လဲ ထုတ်တယ်။ ချင်း (ဂျင်း) မြစ်၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ကြံ၊ ပျားရည်၊ နွားနို့၊ စတာတွေကနေလဲ ထုတ်တယ်။
အရက်ဘယ်လောက်ပါသလဲဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ (ABV) ထုတည်အလိုက်ရာနှုန်းနဲ့ ဖေါ်ပြလေ့ရှိတယ်။ အရက် ၁ဝဝ စီစီမှာ အက်သနော ဘယ်လောက်ပါသလဲကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ အရက်တံဆိပ်မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။ စာမပါတာတော့ သောက်ကြည့်မှ သိမယ်။ သောက်ကြည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဆက်ဖတ်ပါခင်ဗျား။
• ကာလတိုသက်ရောက်မှုတွေကတော့ Intoxication အဆိပ်အတောက်သင့်ခြင်းနဲ့ Dehydration ရေ+ဓါတ်ဆားခန်းခြောက်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်။ ရေရှည်မှာ Alcoholism အရက်စွဲလို့အရက်သမားဖြစ်ခြင်း၊ Malnutrition အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ Chronic pancreatitis နာတာရှည်သရက်ရွက်ရောင်ခြင်း၊ Alcoholic liver disease အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသဲရောဂါတွေ၊ Cancer ကင်ဆာနဲ့ ဗဟိုနဲ့အဝေးပိုင်း အာရုံကြောစနစ်တွေ ထိခိုက်ခြင်း။
• Alcohol အရက်ကို အသဲကနေ Carcinogen acetaldehyde ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓါတ် ပြောင်းပေးနေတာ ဖြစ်တယ်။
• အရက်နည်းနည်းသောက်တာကနေ နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်နဲ့ များများသောက်တာကနေ Stroke (ဆထုတ်ခ်) ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါ (လေဖြတ်ခြင်း) နဲ့ သွေးတိုး စတာတွေကို ဖြစ်စေမယ်။
• အရက်တိုင်းကနေ (ကယ်လိုရီ) ရစေတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေမယ်။ ဗိုက်ထွက်မယ်။ ဖျင်းစွဲနေရင်တော့ ပိုသိသာမယ်။ (အယ်လ်ကိုဟော) ၁ ဂရမ်ကနေ ပျမ်းမျှ 7.1 kcal ရစေတယ်။ ၁ စီစီ (မယ်လ်) ကနေ 5.6 kcal ရစေမယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2014 08:42:00 AM No comments:
မိမိဟာ စကားတစ်ခွန်းကို အောင်မြင်စွာ ပြောချင်ရင်၊ အရေးပါ အရာရောက်ချင်ရင် မိမိရောက်နေတဲ့ ဒေသရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အရင်ဆုံးလေ့လာသင်ယူရမယ်၊ မိမိရောက်နေတဲ့
အသိုင်းဝိုင်းဟာ ဘယ်လို အသိုင်းဝိုင်းမျိုးလည်းဆိုတာ လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါမှသာ ထိ
ထိရောက် ပြောနိုင်ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောကောင်းခြင်းဟာလည်း အတတ်ပညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာထက် သူတို့ ဘယ်လိုစကားတွေ နှစ်သက်တတ်လည်းဆိုတာ သိအောင် အရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ပရိတ်သတ်က နှလုံးသားနဲ့နားထောင်လာနိုင်ဖို့အတွက် ပရိတ်သတ်ရဲ့ နှလုံးသားဆိုတာကို ရအောင် အရင်ဦးဆုံးယူနိုင်ဖို့ တော့ လိုပါလိမ့်
မယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို ရလိုက်ခြင်းဟာ ဒီလူရဲ့ ဘ၀ကို ရလိုက်ခြင်းတစ်မျိုးပါ။
စင်မြင့်ထက်မှာ စကားပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြားမှာ စကားပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံး နားထောင်ပေးတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဟာသလေးတွေ ကြားညှပ် ပြောတတ်ဖို့ လည်းလိုပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ ဓလေ့စရိုက်၊ အမူ
အကျင့်လေးတွေက မိမိ နှစ်သက်မိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်း ပြောဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအခြေခံ သဘောတရားတွေတော့ သိနေရမှာပါ။
ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းဟာ လူတစ်ဖက်သားရဲ့ ဘ၀ သေဆုံးသွားနိုင်သလို၊ အောင်မြင်သွားတဲ့ထိလည်း ဘ၀ပြောင်းလဲ သွား
နိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးထားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ စကားမမှားနိုင်ဖို့ လည်း ဆင်ခြင်ရာရောက်ပါတယ်။ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်လည်း မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
အပြောအဆို ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းဟာ အလိုဆန္ဒတစ်ဝက်ကို ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်က စကားပြောတတ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ အောင်မြင်နေသူတွေဟာ အဟောအပြော ကောင်းသူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာတွေ့ ရှိ
နိုင်မှာပါ။ စကားပြောကောင်းတဲ့သူတိုင်းဟာလည်း စာဖတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာပါ တွဲမှတ်ထားရမှာပါ။ ကျင့်ကြံ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2014 08:34:00 AM No comments:
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတော်ကောင်စီသတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့ ပေကျင်းမြို့နဲ့ ကူမင်းမြို့တို့ကို တစ်ပတ်ကြာသွားရောက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆိုတော့ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေတယ်
လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ပေကျင်းမြို့မှာတော့ လည်စရာပတ်စရာများပေမယ့် အချိန်ကနှစ်ရက်ခွဲလောက်ပဲရခဲ့တာမို့ မြန်မြန်သွားမြန်မြန်စား
ပုံစံဖြစ်သွားရတယ်။ ပေကျင်းမှာ သွားခဲ့ရ တဲ့နေရာတွေက စိတ်ထဲခံစားမှုထိရှခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုကတော့ 798 Art Zone ပါပဲ။
မော်ဒန်အနုပညာခံစားမှုတွေကို အသားပေး ထားတဲ့အတွက် လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေ အထူး နှစ်သက်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အဓိကပြောချင် တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဒီ Art Zone ရဲ့နေရာ ပါပဲ။ အဲဒီနေရာဟာ သီးသန့်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၅ဝ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဂျာမနီနဲ့ ဖက်စပ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့စက်မှုဇုန်နေရာကို ပြောင်း လဲပြင်ဆင်ပြီး ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ အနုပညာဇုန်အဖြစ် ဖန်တီးထားတာပါ။ စတုရန်းမီတာ ၆၄ဝဝဝ ကျော် ကျယ်ဝန်းတဲ့ 798 Art Zone မှာ ပန်းချီပြခန်းပေါင်း ၂၆ဝကျော်ရှိပါတယ်။ မူလစက်ရုံဟောင်း ဗိသုကာ လက်ရာကို မပျောက်ပျက်စေဘဲ ဆက်လက်ထိန်း သိမ်းပြီး ပန်းချီပြခန်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ အနုပညာလက်ရာတွေကိုခံစားရင်း အပန်းဖြေအနား ယူနိုင်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေလဲ အများကြီးရှိပါ တယ်။
ခေတ်အမီဆုံးမော်ဒန် အနုပညာတွေကိုပဲ ပြသထားတဲ့ ဒီအနုပညာဇုန်ကို နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင် နှစ်စဉ်လူပေါင်းလေးသန်းလောက်လာရောက် လည်ပတ်လေ့ရှိတယ်လို့ အနုပညာဇုန် တာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။
အနုပညာဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကို တစ်နေရာ တည်းမှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်တာမို့ နိုင်ငံခြားသား ဝါသနာအိုးတွေကိုလဲတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အနုပညာ ဇုန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အနုပညာ လုပ်ငန်းလေးတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးနေပါတယ်။ အနုပညာ ဇုန်တာဝန်ခံကတော့ ဒီနေရာကို နောက်ဆုံးပေါ် အနုပညာလက်ရာတွေရဲ့ပုခက်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် လိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီအနုပညာဇုန်ထဲမှာ အနုပညာလက်ရာတွေကို အေးအေးဆေးဆေးခံစားကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ တချို့ ပြခန်းတွေက ဝင်ကြေးပေးပြီးဝင်ကြည့်ရတာမျိုး ပါ။ တချို့အနုပညာရှင်တွေက ဒီအနုပညာဇုန်မှာ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကို ပြသရုံသာပြသ ထားတာပါ။ ရောင်းစားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ 798 Art Zone ဟာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူသိများထင်ရှားလာပြီး အနုပညာရှင်တော်တော် များများလာရောက်တဲ့နေရာ၊အနုပညာအေဂျင်စီတွေ ဝင်ရောက်ကျက်စားတဲ့နေရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
မော်ဒန်အနုပညာကိုဦးစားပေးထားတဲ့ ဒီနေရာ မှာ တရုတ်ရိုးရာအနုပညာလက်ရာတွေကိုတွေ့ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အင်စတော်လေးရှင်း၊ ပါဖောမန့်စတဲ့ မော်ဒန်အနုပညာလက်ရာတွေကိုဦးစားပေးပြသထား တာပါ။ အနုပညာဇုန်တာဝန်ခံလိုက်လံရှင်းပြတဲ့ ပြခန်းတွေထဲက ရင်ခုန်မိတဲ့နေရာကတော့ အရောင် တောက်တောက်တွေခြယ်သထားတဲ့ ကွမ်ရင်မယ် တော်ရုပ်တုပါပဲ။ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါ၊ အနီ စတဲ့အရောင်တွေနဲ့ ကွမ်ရင်ကို ခြယ်သထားပြီး အောက်ခြေမှာ အုတ်နီခဲတွေခင်းကျင်းထားပါတယ်။ သူတို့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက လူတွေဟာကိုးကွယ်မှု တွေကို ဘာသာရေးအတွက်သက်သက်မဟုတ်တော့ ဘဲ စီးပွားရေးရလိုမှုနဲ့ပါ ကိုးကွယ်လာတဲ့သဘောကို ဝေဖန်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။
နောက်ခံစားမိတဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုက တော့ ပေကျင်းမြို့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်က ကူမင်းမြို့မှာပါ။ ပေကျင်းလို ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ မြို့မဟုတ်တာမို့ ကျွန်မအဖို့အသက်ရှူချောင်သလို ခံစားမိပါတယ်။ ကူမင်းမြို့ခံလူတွေကြည့်ရတာ သက်သောင့်သက် သာရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ Dynamic Yunnan ဆိုတဲ့ ကပွဲတစ်ခုကိုကြည့်ခဲ့တာပါ။ လူမျိုးစုတွေရဲ့ယဉ်ကျေး မှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတွေအသားပေးဖော်ကျူးထားတဲ့ အနုပညာကပွဲတစ်ခုပါ။ ဒီအနုပညာကပွဲကို ကျွန်မကြည့်ရှုခွင့်ရတာ နှစ်ကြိမ်မြောက်ပါ။
ဗုံတီးခတ်မှုစွမ်းရည်၊ သံပြိုင်သီဆိုမှုစွမ်းရည် တွေ၊ တစ်ဦးချင်းအစွမ်းပြတဲ့ အကဖန်တီးမှုတွေနဲ့ တစ်နာရီခွဲအချိန်ကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကပွဲ ဝင်ကြေးဟာ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ကျပ်လေးသောင်းနီး ပါးကျသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲကိုခံစားကြည့်ရှု သူ တော်တော်များပါတယ်။ နေပေါ်ထွက်လာဖို့ ဆုတောင်းတဲ့ပြကွက်၊ လမင်းကကွက်စတာတွေ ကို ပရိသတ်အားပေးကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အော်ပရာအကတွေမှာ ပရိသတ်တွေကို အဓိက ဆွဲဆောင်နိုင်တာက အလင်းပေးမှု၊ တင်ဆက်မှု၊ ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားမှုတွေပါပဲ။
ဒီပွဲမှာအဓိကဖျော်ဖြေမှု(သို့မဟုတ်) အရေးကြီး ဆုံးလို့ဆိုရမယ့်အပိုင်းကတော့ ဒေါင်းအကပါပဲ။ တရုတ်အကပညာရှင် ယန်လိပင်ရဲ့ နာမည်ကြီးက ကွက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီနေ့ကပွဲမှာတော့ သူကိုယ်တိုင်ကပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့တပည့် တစ်ယောက်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်နွဲ့နှောင်းပျော့ပျောင်းမှုကို ဦးစား ပေးပြီး ကပြသွားတဲ့ပြကွက်တွေက အံ့အားသင့် စရာပါပဲ။ သူတို့ဆီက ကကွက်တွေကိုမြင်ရတော့ မြန်မာအက ကကွက်တွေနဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ သွားတူညီတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမင်းကကွက်ရဲ့ လက်အကတွေမှာပါ။
လူမျိုးစုတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံး တမ်းတွေကို ဒီအကတွေမှာ ခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကိုလဲ ဒီအကတွေမှာလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုချင်းကွာဟချက်ရှိနေသေးတဲ့ မြို့နှစ်ခု အကြားက အနုပညာခံစားမှုတွေကလဲမတူညီပါ ဘူး။ တစ်မြို့ကခေတ်ရှေ့သိပ်ပြေးလွန်းနေပြီး တစ်မြို့ ကတော့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကျန်ရှိနေဆဲ ပါ။ ဒီမြို့နှစ်မြို့က ကျွန်မကိုပေးတဲ့အနုပညာ ခံစားမှုတွေကလဲ ရောပြွမ်းနေပါတော့တယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/29/2014 08:28:00 AM No comments:
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ . . .
ကိုယ့်မှာရှိသမျှဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ၊ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိသမျှကို
အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်လိုက်တာပဲ။လူတစ်ယောက် အတွက်
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသေးသလား။မရှိတော့ဘူးနော်။
Personality (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး) ဆိုတာထဲမှာ-
•လူအများနဲ့ ဆက်ဆံရေး ဆိုတာတွေလည်း ပါတယ်နော်။
Personality ဆိုတာ လူတစ်ယောက်မှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ အလားအလာရှိသမျှ အကုန်လုံး
အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်တာလို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ထားပြီးပြီဆိုတော့ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး။
ဒါကြောင့် ပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ၊သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေရအောင် ကြိုးစားရမယ်။
သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေး၊ ကြည်ကြည်လင်လင်လေးဖြစ်အောင်အမြဲတမ်း ကြိုးစားရမယ်
The development of personality means fidelity of the law of one’s beings.
ကိုယ့်ရဲ့ Personality ကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာရှိတာပဲ။
【ဆရာတော် ဦးဇောတိက၏“ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မြင့်မားစေရန်” မှ-】
Dhamma Danã Source ►
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/27/2014 08:00:00 AM No comments:
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာလေးတစ်ခုဟာလည်း သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ လှလှ မလှလှ ပုံစံကျကျ မကျကျ တစ်ခုချင်း အစိတ်အပိုင်း တွေက ကြည်လင်နေမယ်။ ရှင်းသန့် သပ်ရပ်နေရမယ်။ သွားလေးဆိုလည်း ဖွေးနေမယ်။ မျက်နှာ အသားအရေဟာလည်းကြည်လင်နေမယ် စသဖြင့် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းဟာ ရှင်းသန့် နေမယ်ဆိုရင် အများအလယ်မှာ တင့်တယ် ပါလိမ့်မယ်။
၁။သွားလေးတွေ ပုလဲစီသလို လှပအောင်
ပုလဲလေးတွေ စီသလိုသွားလေးတွေဖွေးသန့်ဖို့ဈေးကြီးတဲ့သွားတိုက်ဆေးတွေ ၀ယ်မ သုံးနိုင်ရင် ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ ။ သံပုရာ ရည်တစ်ဇွန်း၊ဆိုဒါတစ်ဇွန်း၊ ဆားဇွန်းဝက် ရှိရင် ဖြူဖွေးလှပအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သွားတိုက်ဆေး ကို ရရှိနိုင် ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်း သုံးမျိုးကို ရောမွှေပြိးရင်မနက် ည နှစ်ကြိမ် တိုက်ပါ။ အကုန်သက်သာတဲ့နည်းနဲ့မယုံရင် စမ်းကြည့်ဖြူဖွေး တောက်ပ နေစေရမယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
ဒူး တံတောင်ဆစ် ခြေမျက်စိတွေဟာ မည်းမယ်ဆိုတာချည်းပါပဲ။ စိတ်ညစ်ဖို
ကောင်းပါတယ် လို့ညည်းနေမယ့်အစား ဒါလေး နဲ့လုပ်ကြည့် လွယ်လွယ်လေးပါ။သံပုရာသီးပဲ လိုပါ တယ်။ သံပုရာသီးကို ထက်ပိုင်းပိုင်းပြီး အဲဒီသံပုရာခြမ်းနဲ့ နေ့ စဉ် ပုံမှန် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ထူးခြား သိသာစွာ အညိုအမဲအသားမာတွေ လျော့ပါး ပျောက်ပျက် သွားပါလိမ့်မယ်။
မျက်ဝန်းတ၀ိုက် ညိုပြီး အကြည့်ရဆိုးနေလို့မိတ်ကပ်လိမ်းရင်လည်း
မျက်ကွင်းညိုပြီး ထင်း ထင်းကြီး ဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်နေ တဲ့သူတွေ အတွက်
မျက်ကွင်းညို မျက်အိတ်တွဲ တာတွေ ပျောက်ဖို့ဈေးကြီးတာတွေ ၀ယ်မသုံးပါနဲ။ မီးဖိုထဲက အာလူး တစ်လုံးနဲ့ တင် ကိစ္စပြီးပါ တယ်။ အာလူးကို အခွံနွာအသားတွေကို ပါးပါးလှီး နုတ်နုတ်စဉ်း လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး အရည် ညှစ်ပြီးရင်အာလူးဖတ်တွေကို မျက်လုံးတ၀ိုက်ကို အုံပေးပါ။ ၁၀မိနစ်လောက်တော့ ကြာ အောင်ထားပါ။ အဲဒါကို နေ့ စဉ် (သို့ ) ရက်ခြား ဆိုသလို အုံပေးရင်မျက်ကွင်းညိုခြင်း ကနေ ကင်းဝေး ပါလိမ့်မယ်။
၄။ရင်းနေတဲ့ ၀က်ခြံများ ညှိုးသွားအောင်
၀က်ခြံ ပေါက်နေပြီး ညှစ်ပြန်တော့လည်း အမာရွတ် ထင်ပြီး ရင်းဦးမယ်။
လွယ်ပါတယ်။ ၀က်ခြံထိပ်ကို ပျားရည် စွတ်ထားတဲ့ ဂွမ်းလေးနဲ့တို့ ပေးပါ။
၀က်ခြံ ညှိုးခြောက်ပြီး သူ့ အလို လို အဆံ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
၅။အသားပတ်တဲ့ အခါ ခရမ်းချဉ်သီးကို သတိရပါ
ဒီကိစ္စကို ခရမ်းချဉ်သီးက လုံးဝ တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို
ထက်ခြမ်းခြမ်း အထဲက အဆန်တွေကိုထုတ် အနှစ် ချည်း သီးသန့် နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်တိုက် လိမ်းကျံ ပေးပါ။ ၁၀ မိနစ်လောက် နေရင် ရေနွေးနွေးနဲ့ဆေးချပါ။
အသားပတ်တဲ့ အခါတိုင်း လုပ်ပေးရင် မျက်နှာ အသားအရေပါ ကြည်လင် ချောမွေ့ သွားလိမ့်မယ်။
၆။နေလောင်ရင် နွားနို့ သုံး
နွားနို့ နဲ့ရေချိုးပြီး အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ခေတ် ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။ နွားနို့ နဲ့ ရေချိုးပါလို့ တော့ မတိုက်တွန်း ချင်ပါဘူး။
အကုန်အကျ များလို့ချောက်တွန်းတယ် ထင် မှာ စိုးလို့ ပါ။ ဒါပေမဲ့
ပင်လယ်ကမ်းစပ် သွားလို့ ပဲ နေလောင်လောင်၊ နေပူထဲ သွားလို့ ပဲ အသားမဲမဲနွားနို့ ကို ကြွက်ကြွက်ဆူအောင် ကြိုပြီးရင် အအေးခံ မလိုင်ကို စားပစ်ပါ။(မလိမ်း ပါနဲ့နှမျောစရာကြီး) ပြီးမှ ဂွမ်းစလေးနဲ့နေလောင်တဲ့ နေရာကိုပွတ်သပ် လိမ်းကျံ ပေးပါ။ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာရင် ရေဆေးလိုက်ပါ။ လုပ်လေ၊အကျိုးရှိလေ ဆိုတာ လုပ်ဖူးရင် သိသာလာပါလိမ့်မယ်။
ပျိုမေတို့သိစေဖို့ မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
အလှအပရေးရာဆွေးနွေးကြမယ် (Beauty talk)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/27/2014 07:58:00 AM No comments:
ဂျက်ကီချန်းရဲ့ပုံပြင် ( နိုင်းနိုင်းစနေ ဘာသာပြန်သည်။ )
ကျွန်တော်က နာမည်မရှိတဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝက စခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်တော် အသက်(၆)နှစ်အရွယ်မှာ ကျွန်တော့်ဖေဖေက ပြဇာတ်ရုံမှာ ကျွန်တော်ကို"ရောင်း"ခဲ့သလားတောင် ထင်ရပါတယ်။ အဲဒီကစပြီး ပြဇာတ်တွေကို ကျွန်တော်စသင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်အရမ်းပင်ပန်းခဲ့တယ်။ စားဖို့ရှိရင်၊ အိပ်ရရင်ပဲ ကျွန်တော်အရမ်းကျေနပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကားဖြစ်တဲ့ "Butterfly Lovers"ကို ရိုက်တုန်းက အဲဒီဇာတ်မှာ ကျွန်တော်လူသေကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် သရုပ်ဆောင်တော့ ဒါရိုက်တာက ကျွန်တော့်ကိုဒေါသတကြီး ဆဲတယ်။ "မလှုပ်နဲ့.. မင်း သေနေပြီ။ မင်းဗိုက်က ဘာလို့လှုပ်နေသေးလဲ" တဲ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်။ လူသေကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တာတောင် ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း သရုပ်မဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ အသက်ရှုရမယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ အသက်အောင့်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ကင်မရာက လူသေကောင်ဖက်လှည့်မယ်။ ဘယ်လိုသေရမယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်... နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး "သေ"နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက သိုင်းနည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ သိုင်းနည်းပြရဲ့ဟန်ပန်က ခန့်ညားလို့ပါ။ သိုင်းနည်းပြတစ်ဦးလုပ်ချင်ရင် ကင်မရာရိုက်ကွက်ကို အရင်နားလည်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကင်မရာထမ်းသူအဖြစ် ကျွန်တော်(၂)နှစ်လုပ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီခေတ်တုန်းက ရုပ်ရှင်သိုင်းလောကမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ လူတစ်ဦးရှိတယ်။ သူက နေရာမြင့်တယ်။ နောက်လိုက်တွေများတယ်။ အဲဒီနောက်လိုက်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နောက်လိုက်ရဲ့နောက်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီလူ ကျွန်တော့်ကို
သိသွားတော့ သူသွားတတ်တဲ့လမ်းတွေမှာ ကျွန်တော်နေ့တိုင်းသွားရပ်ပြီး သူ့ကိုမျက်နှာပြခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ သူက ကျွန်တော့်ရှေ့မှာကားရပ်ပြီး မေးတယ်
"မင်းက ငါ့အဖွဲ့ကလား"။ ကျွန်တော်က ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို သူကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်စေပါတယ်။တလမ်းလုံးကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်းမှ
ရိုက်ကွင်းရောက်တော့ သူ့ကားကို ကျွန်တော်ဖုံသုတ်ပေးတယ်။ ဒီတစ်သက်မှာ ကားကိုဒီလောက်ထိပြောင်လက်နေအောင် ကျွန်တော်ဖုံမသုတ်ခဲ့ဖူးဘူး။ သူ့ကားကို ချောင်ကြိုချောင်ကြားမကျန် သွားကြားထိုးတံနဲ့ ကျွန်တော်သန့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ရိုက်ကွင်းသွားတိုင်း ကျွန်တော်ကားကြုံလိုက်ခွင့်ရတယ်။ နေ့တိုင်း သူ့ကားကိုဖုံသုတ်ပေးတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီသိုင်းဆရာနံဘေးက လူသိများသူဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ခင်ဗျားတို့ကို ကပ်ဖားတတ်ဖို့ ကျွန်တော်သင်ပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာအလုပ်လုပ်နေသူက ကိုယ့်ကို လူတွေသတိထားမိလာအောင် ရှာကြံလုပ်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက သတင်းစာထဲမှာပါရဖို့ ကျွန်တော်ဘာမဆိုလုပ်ခဲ့တယ်။ သတင်းထောက်တွေ သတိထားမိအောင်ဆိုပြီး နေကာမျက်မှန်မည်းကြီးကို တပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သတင်းထွက်လာရင် ကျွန်တော်ပုံမပါခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ပုံ အညှပ်ခံခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် မင်းသား/မင်းသမီးဘေးမှာ ကျွန်တော်သွားရပ်ပြီးရိုက်တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်ပုံ အညှပ်မခံရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ပုံ သတင်းစာထဲပါခဲ့တယ်။
လူအများသိကြတဲ့အတိုင်း ဂျက်ကီချန်းရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက အသက်ကိုတောင်မမှုခဲ့ပါဘူး။ သူ့လောက်အလုပ်လေးစားတဲ့လူ သရုပ်ဆောင်လောကမှာ နောက်တစ်ယောက် မရှိနိုင်တော့ဘူး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်း သူဘယ်လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့သလဲလို့ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းသားတစ်ယောက်က မေးခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေက မရေမတွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်
နေရာအနှံ့ တစ်ကြိမ်ထက်မက ကျိုးကြေဖူးသလို မီးလောင်ရာ၊ ကွဲအက်ရာ၊ ခွဲစိတ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ ခြေဖျားကနေ ခေါင်းအထိ ဒဏ်ရာမရခဲ့ဖူးတဲ့နေရာဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဟိုးအရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းက အာမခံတွေမရှိခဲ့ဘူး။ မီးလောင်တဲ့ဇာတ်ကွက်ကို ရိုက်တော့ ကျွန်တော်က တကယ့်မီးကိုသုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ခုံးမွေးတွေတောင် မီးလောင်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ မီးအစစ်နဲ့သုံးသုံး မီးအတုနဲ့သုံးသုံး ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာ အသက်နဲ့ကစားတာပါပဲ။
ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို ဒီကနေ့ထိ လူတော်တော်များများက ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တချို့မှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အထဲက ဒီကနေ့ထိ ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရရှိနေတာက ကျွန်တော်ဦးခေါင်း (၂)ခါခွဲစိတ်ခဲ့ရတာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ယူရိုစလားဗီးယားမှာ ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်။ အဲဒီနေရာက တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နေတယ်။
ဆေးကုသမှုအဆင့်ကလည်း မမြင့်ဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်သေမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကြုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်ရင် ဒီနေ့အလုပ် ဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်တယ်။ ဒီနှစ်မှာဘာလုပ်မလဲလို့ တွေးတယ်။ နောက်နှစ်အတွက် ကျွန်တော်မတွေးဘူး။ အသက်က အင်မတန် ကျွတ်ဆတ်တယ်၊ ကျိုးလွယ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကို ကျွန်တော်တစ်ရက်တောင် မဖြုန်းပါဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီလို့ ကျွန်တော်မပြောဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြောရရင် ယူရိုစလားဗီးယားမှာ ခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်က လူ့ဘဝကိုမြင်တဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါပဲ။
ဟိုးအရင် တစ်ချိန်တုန်းက ဘယ်ခုနှစ်မှာ ဂျက်ကီချန်းရဲ့တစ်နှစ်တာဝင်ငွေက သန်းဘယ်လောက်ဆိုပြီးသတင်းတွေက ကြေညာခဲ့ဖူးတယ်။ဒါကိုလူငယ်အများက အရမ်းအားကျခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာ ကျွန်တော်ရသင့်ရထိုက်တာပါ။
နှစ်အများကြီး ကျွန်တော်စတေးခံပြီး ရလာခဲ့တာပါ။ လူငယ်တွေဟာ တခြားလူရယူတာကိုပဲ မကြည့်သင့်ဘူး။ သူတို့ပေးဆပ်တာကိုလည်း ကြည့်သင့်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်အိပ်မက် မက်နေကြတဲ့ ထောင်သောင်းများစွာသော သင်တန်းသားတွေကိုဂျက်ကီချန်းကအခုလိုအားမနာတမ်း
creditးနိုင်းနိုင်းစနေ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/27/2014 07:55:00 AM No comments:
တိကျတဲ့ အဖြေ ။ ( နိုင်းနိုင်းစနေ ဘာသာပြန်သည်။ )
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ နာမည်ကြီး စိတ်ပညာရှင်
ဂျေပီဂီးလ်ဖို့ဒ် (J.P. Guilford ) ကိုအမေရိကန်စစ်တပ်က ငှားပြီး
စမ်းသပ်မှုတစ်ခု လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်။သူ့ပညာကိုသုံးပြီး အကောင်းဆုံး၊
အသင့်တော်ဆုံး လေယာဉ်တပ်သားတွေ ရွေးထုတ်ပေးဖို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ထင်သလို မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အစမ်းသပ်ခံ
တပ်သားတွေဟာ လေ့ကျင့်ချိ်န်မှာ တက်ညီလက်ညီနဲ့ အမှတ်ပြည့်ရ
ပေမယ့် တကယ်တန်း ရှေ့တန်းရောက်တာနဲ့ အပစ်ချခံရတော့တယ်။
ဒါကြောင့် လေယာဉ်တပ်သားသေဆုံးမှုတွေပဲ တိုးလာနေခဲ့တယ်။
ဂီးလ်ဖို့ဒ်က ဒီလိုပြဿနာရဲ့ အဖြေကို ရှာဖွေစူးစမ်းချိန်မှာ မသေပဲ
ကျန်ရစ်တဲ့ လေတပ်သားအများစုဟာ အရာရှိတွေ(တပ်သားဘ၀ကနေ
ပင်စင်ယူထားတဲ့သူတွေ)က ရွေးထုတ်ထားတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတာကို
ဂီးလ်ဖို့ ခေါင်းခြောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ စေ့စပ်သေချာတဲ့
စမ်းသပ်မှုပညာက အဲဒီအရာရှိတွေရဲ့အမြင်လောက်တောင် မစွမ်းဘူးလား။
ဒီပြဿနာကို အရာရှိတစ်ယောက်ကို ဂီးလ်ဖို့ဒ် သွားမေးတယ်။
အရာရှိက " ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။
ဒီလိုလုပ်ရအောင် တပ်သားတချို့ကို ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်အတူရွေးကြည့်
" ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ အတူရွေးကြရအောင်"ဆိုပြီး နှစ်ယောက်
ရွေးချယ်ချိန်မှာ ပထမဆုံးတပ်သားဝင်လာတော့ ဂီးလ်ဖို့ဒ်က တစ်ဘက်
" ကောင်လေး၊ တကယ်လို့ ဂျာမန်တွေကမင်းလေယာဉ်ကို တွေ့သွားပြီး
အမြင့်ပစ် ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်တော့မယ်ဆိုပါစို့။မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ" အရာရှိက ပထမမေးခွန်းစမေးလိုက်တယ်။
" လေယာဉ်ကို ဒီထက်ပိုမြင့်အောင်ပျံမယ်။ "
" မင်းဘယ်လို သိတာလဲ "
" စစ်တိုက်လမ်းညွှန်စာအုပ် ထဲမှာ အဲဒီလို တိကျတဲ့အဖြေ ကိုရေးထားပါတယ်။မှန်တယ်မဟုတ်လား "
" မှန်ပါတယ်။တိကျတဲ့အဖြေပါ။မင်းသွားနိုင်ပါပြီ "
" ဆရာ မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးတာလား။တခြားမေးခွန်း မရှိတော့ဘူးလား "
" ဟုတ်တယ်။မေးခွန်းတစ်ခုထဲပဲ။မင်းသွားနိုင်ပါပြီ။ ကျန်တဲ့မေးခွန်းက
ဒုတိယ တပ်သားထပ်ဝင်လာတယ်။တပ်သားနေရာယူပြီးတာနဲ့ အရာရှိက အပေါ်ကမေးခွန်းကိုပဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်။
အမြင့်ပစ် ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်တော့မယ်ဆိုပါစို့။မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ"
" တိမ်တိုက်တစ်ခုရှာပြီး အမြန်ပုန်းလိုက်မယ်"
" ဟုတ်လား၊တကယ်လို့ တိမ်မရှိနေဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ "
" မြေပြင်ကို အမြန်ပျံဆင်းပြီး သူတို့နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့လိုက်မယ်။ "
" မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံတာလား "
" ဒီလိုဆိုရင် လေယာဉ်ကိုယ်ထည်ကို ဘယ်ညာယိမ်းလိုက်ရင်ကော "
" လေယာဉ်က မင်းမောင်းတာလေ။ ငါမောင်းတာမဟုတ်ဘူး။
" ဆရာပြောတာက စစ်တိုက်လမ်းညွှန်စာအုပ်လား "
" အဲဒီစာအုပ်မဟုတ်ရင် မင်းက ဘာစာအုပ်ဖတ်ချင်သေးလို့လဲ "
" စစ်တိုက်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စာအုပ်က ထူလွန်းလို့ကျွန်တော်အကုန်မမှတ်မိပါဘူး။
ကျွန်တော်လေယာဉ်မောင်းမယ်။အစားအစာအညွှန်းတွေလိုရေးထားတဲ့ စာတွေကိုကျွန်တော်မဖတ်ချင်ဘူး။ "
" မင်းဘာကို ဆိုလိုတာလဲ "
" ကျွန်တော် ကြက်ဥကြော်လည်းရတယ်။အသားကင်လည်းရတယ်။
အမေနဲ့အတူapple pie တွေကူလုပ်လည်းရတယ်။ဒါပေမယ့်
အစားအစာအညွှန်းတွေလို ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ပါလို့ ၁-၂-၃ အစဉ်လိုက်
" ကောင်းပြီ။မင်းသွားနိုင်ပါပြီ "
" ဆရာကျွန်တော့်အဖြေ မှားသွားပြီလား "
" အခုက မေးခွန်းပြန်မေးရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူး "
ဒုတိယတပ်သားထွက်သွားတာနဲ့ အရာရှိက ဂီးလ်ဖို့ဒ် ဖက်လှည့်ပြီး
" ဆရာ၊ဆရာ့ကိုရွေးခိုင်းရင် ဘယ်တစ်ယောက်ကို ဆရာရွေးမလဲ "
" ခင်ဗျားရဲ့ အကြံဥာဏ် ကိုကျွန်တော်အရင်သိချင်တယ် "
" ကျွန်တော်က ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုရွေးမယ် "အရာရှိကပြောတယ်။
" ဘာဖြစ်လို့လဲ "
" ပထမတစ်ယောက်ဖြေတဲ့ အဖြေက တိကျအဖြေမှန် ဆိုတာမှန်တယ်။
ရန်သူရဲ့ ဒုံးကျည်ကလွတ်အောင်လေယာဉ်ကို ဒီထက်မြင့်အောင်ပျံမယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျာမန်တွေက ငတုံးတွေမဟုတ်ဘူး။တိကျတဲ့ အဖြေမှန်း ကျွန်တော်တို့သိသလို သူတို့လည်း သိတယ်။ဒါကြောင့် ဂျာမန်တွေက နိမ့်တဲ့ နေရာကို တစ်ချက်အရင်ပစ်ပြီးလေယာဉ်အမြင့်ပျံမယ်ဆိုတဲ့
တကယ့် သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်က အမြင့်ဆုံးမှာထားထားတယ်။
" အော် ဒီလိုလား "
မလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် သူ့မှာလိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရှိတယ်။အခက်အခဲကြုံတာနဲ့ အခက်အခဲကလွတ်အောင် နည်းမျိုးစုံ သုံးနိုင်တယ်။နည်းများလေလွတ်မြောက်ဖို့ များလေပဲ။ကျွန်တော့်လို စစ်ပွဲအများကြီးတိုက်ခဲ့ဖူးတာတောင်မှ မသေပဲကျန်နေတဲ့သူတစ်ယောက် က
စစ်မြေပြင်မှာ ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ စစ်တိုက်လမ်းညွှန်
စာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုပိုသိတယ်။စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာနဲ့တူတာဆိုလို့ တစ်မျိုးပဲရှိတယ် "
" ဘယ်တစ်မျိုးလဲ "
" ဈာပနအခမ်းအနားပဲ ၊အဲဒီတစ်ခုက စာအုပ်ထဲရေးထားတဲ့ အတိုင်း တစ်လုံးမှ မလွဲဘူး။စစ်တိုက်တာကို အလွတ်ကျက်ရမယ်ဆိုရင်
အရာရှိရဲ့စကားကို နားထောင်ပြီးနောက် ဂီးလ်ဖို့ဒ်က သူ့ရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်ကို အသစ်ပြောင်းလိုက်တော့တယ်။
ဆန်းစစ်ချက်အသစ်ရဲ့ မေးခွန်းတွေက " တကယ်လို့ သင့်ဆီမှာ အုတ်ခဲ တစ်ချပ်ရှိမယ်။အဲဒီအုတ်ခဲရဲ့ မတူတဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ၅၀ ကိုပြောပါ။" ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။
ဂီးလ်ဖို့ဒ် ဟာ ဒီလိုဆန်းစစ်ချက်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အကောင်းဆုံး လေယာဉ်တပ်သားတွေ ကိုရွေးထုတ်နိုင်ခဲ့သလို " ဆန်းသစ်တဲ့ စမ်းသပ်မှု " တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။
credit to မူရင်းစာရေးသူနှင့် ဘာသာပြန်သူ ဆရာမ နိုင်းနိုင်းစနေ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/27/2014 07:51:00 AM No comments:
ငါကံဆိုးလိုက်တာလို့ တွေးမိခဲ့ ရင်
ငါကံဆိုးလိုက်တာလို့ တွေးမိခဲ့ ရင်။ ( Spring Flowers ဘာသာပြန်သည်။ )
ဘ၀ကြီးက ဆိုးလိုက်တာနော် '' ဆိုတဲ့ ခံစားချက်များ ရဖူးရဲ့ မဟုတ်လား ။
'' ဒီအခြေအနေမျိုး မဟုတ်ဘဲ နောက်အခြေအနေတစ်ခုထဲမှာဆိုရင်
ကောင်းမှာဘဲ '' လို့များရော မထင်ဖူးဘူးလား ။
အလုပ်ကလည်း အဆင်မပြေ ၊ ဘ၀က မသာယာ ၊ အရာရာဟာ စိတ်ပျက်ဖွယ်လို့ထင်နေမိတာမျိုးရော ရှိသလားဗျ .........။
မနေ့ကမှ ကျနော့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောမိပြီးတဲ့နောက် ဘ၀အပေါ် ထားတဲ့ ကျနော့် သဘောထား လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဗျာ ။
သူက ပြောတယ်ဗျ .....သူအလုပ် ၂ ခု လုပ်ရပေမယ့် တလတလကို ဒေါ်လာတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘဲ ရတယ် တဲ့ ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ကျေနပ်နေတာဘဲ ။ အဲဒီတော့ ကျနော်က ဘယ်နှယ်ကြောင့် ဒီလို ကျေနပ်နေနိုင်တာလဲ လို့ သူ့ကို မေးကြည့်မိတယ်။
စဉ်းစားကြည့်လေ.....သူ့မှာ ဒီ မစို့မပို့ငွေလေးနဲ့ ထောက်ပံ့ထားရတဲ့ အမေအိုအဖေအို ရှိတယ် ၊ ယောက္ခမတွေ ရှိတယ် ၊ မိန်းမနဲ့ သမီးနှစ်ယောက်လည်း ရှိတယ် ။ တစ်အိမ်ထောင်လုံးအတွက် ရှိသမျသော ရေဖိုးမီးဖိုး ဘာညာသရကာ bill တွေကိုလည်း သူဘဲ ပေးရတာဗျ ။ ကျနော်က အဲလိုမေးတော့ သူက ဖြေတယ် .......အိန္ဒိယမှာ သူကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကြောင့်ပါ တဲ့ ။
အဖြစ်က ဒီလို တဲ့ ဗျ.....လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက်က သူစိတ်ဓါတ်အတော်ကျနေခဲ့တယ် ၊ အကြီးအကျယ် အဆင်မပြေ ကျရှုံးမှုတစ်ခု အပြီးမှာ သူဟာ အန္ဒိယကို ခရီးထွက်ခဲ့တယ် ။
အဲဒီလို ခရီးအတွင်းမှာ တခါတော့ သူ့မျက်စိ ရှေ့တည့်တည့်မှာတဲ့ ဗျာ......အိန္ဒိယအမျိုးသမီး ကလေးအမေတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကလေးရဲ့ ညာလက်ကို ဓါးနဲ့ ဖြတ်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။
အဲဒီ အမေ လုပ်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲက အကူအညီမဲ့မှုရယ် ၊ အသက် ၄ နှစ်အရွယ် အပြစ်မဲ့ကလေးရဲ့ နာကျင်လွန်းလို့ ဟစ်အော်လိုက်တဲ့ စူးစူးဝါးဝါးအသံရယ်ဟာ သူ့ကို ဒီနေ့အထိ ခြောက်လှန့်နေဆဲဘဲ ....တဲ့.....။
အမေလုပ်ပြီး ကလေးကို ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် လုပ်ရသလဲ လို့ မေးကောင်း မေးချင်ကြမှာပေါ့ဗျာ ။ ကလေးကများ သိပ်ပြီး မလိမ်မိုး မလိမ္မာလို့လား ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကလေးလက်မှာ ကူးစက်ရောဂါ ဘာညာများ ရှိနေသလားပေါ့ ။
တခုမှ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ '' တောင်းစားခိုင်းဖို့ '' ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာတဲ့ဗျာ ။ ခိုကိုးရာမဲ့ပြီး အကြံကုန်နေတဲ့ မိခင်ဟာ ကလေးကို မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားအောင် တမင်တကာ လုပ်လိုက်တာလေ ။
ဒါမှလည်း ကလေးကလမ်းပေါ်ထွက် တောင်းစားနိုင်မယ်ပေါ့ ။
ကျနော်ဗျာ..... အစက ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြားရတော့ လက်မခံနိုင်ဘူးဗျ ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေ ။ ကျနော် မမြင်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့တစ်နေရာမှာ တကယ်ကို ဖြစ်ခဲ့တာဗျ ။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းဟာ ဒီမြင်ကွင်းကိုလည်း မြင်လိုက်ရော လန့်လန့်ဖျပ်ဖျပ်နဲ့ သူ့စားလက်စ ပေါင်မုန့်ဟာ လွတ်ကျသွားတယ် ။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပါဘဲတဲ့ဗျာ.....ကလေးတွေ လေးငါးခြောက်ယောက်ဟာ သဲပေနေတဲ့ အဲဒီပေါင်မုန့်ကို လုဖို့ အပြေးအလွှားအုံခဲလာတော့တာဘဲ ။
ပြီးတော့ ပေါင်မုန့်တစ်စလေး စားရဖို့ အရေး တစ်ယောက်ဆီကနေ တစ်ယောက်လုကြပါရော ။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းရဲ့ တုံပြန့်မှုပေါ့ဗျာ ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းလည်း ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို မြင်ရတော့ လန့်ဖျပ်စိတ်ထိခိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ လမ်းညွှန် guide ကို အနီးဆုံး ပေါင်မုန့်ဆိုင်ကို မောင်းဖို့ ပြောလိုက်တယ် ။ သွားတာမှ တစ်ဆိုင်တောင်မကဘူး ...နှစ်ဆိုင်ဗျ ။ ဆိုင်နှစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကို တစ်လုံးမှ မကျန်အောင် ၀ယ်လိုက်တယ် ။
ဆိုင်ရှင်ကတော့ အံ့သြမှင်သေနေတာပေါ့ဗျာ ။ ဒါပေမယ့် လိုလိုလားလားဘဲ ရှိသမျကို ရောင်းလိုက်ပါတယ် ။ ပေါင်မုန့်အလုံး ၄၀၀ ကို ၀ယ်တာ ဒေါ်လာ တစ်ရာတောင် မကျခဲ့ပါဘူး...တစ်လုံးကို ၂၅ ပြားတောင် မကျဘဲကိုးဗျ ။
ဒါနဲ့ဘဲ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတချို့ကို နောက်ထပ် ဒေါ်လာတစ်ရာဖိုး ထပ်ဝယ်ခဲ့လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ သူက အဲဒီကလေးတွေ ရှိနေတဲ့ လမ်းထဲကို မုန့်အပြည့်တင်ထားတဲ့ ကားနဲ့ ၀င်သွားတယ် ။ ပြီးတော့ ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတချို့ကို မုန့်တွေ ပစ္စည်းတွေ ဝေပေးလိုက်တယ် ။ ကလေးတွေဆိုတာလည်း အများစုက မသန်မစွမ်းတွေပါ ။ အဲလိုဝေတော့ သူတို့ခမျာ တဟေးဟေးနဲ့ ပျော်ကြ သူ့ကို ကျေးဇူးတင် အလေးပြုကြ လုပ်ကြတာပေါ့ ။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းလည်း အဲဒီတော့မှ သူ့ဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေးမိသတဲ့ .......သြော်.....လူတွေဟာ ၂၅ ပြားတောင် မတန်တဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးအတွက် ဂုဏ်သက္ခာဆိုတာကို စွန့်လွှတ်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါလားပေါ့ ။
လို့လည်း သူ့ကိုယ်သူ ထင်မိလာတယ် ။ ပြည့်စုံတဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာကို ရထားတာ ၊ အလုပ်တစ်ခု မယ်မယ်ရရ ရှိတာ ၊ မိသားစု ရှိတာ ၊ ဘယ်အစားအစာက ကောင်းတယ် ဘယ်ဟာကဖြင့် အရသာ မရှိဘူးရယ်လို့ ညဉ်းတွားခွင့်ရတာ ၊ အ၀တ်အစား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ၀တ်ခွင့်ရတာ .........ဟောဒီ ကလေးတွေ လူတွေမှာ မရှိတဲ့ တခြားတခြားသော အရာတွေများစွာ သူ့မှာ ရှိနေတာဟာ ကံကောင်းလိုက်တာ လို့ မြင်လာတယ် ။
အခုတော့ ကျနော်လည်း ကျနော့်သူငယ်ချင်းလို တွေးနေ ခံစားတတ်နေပြီဗျ ။ ကျနော့်ဘ၀က တကယ်ရော အဲသလောက် ဆိုးခဲ့လို့လား ။
ဟင့်အင်း....မထင်ပါဘူး ။ အဲသလို ဆိုးဖို့အကြောင်း ရှိကို မရှိတာပါ ။
ဒါနဲ့ ခင်ဗျားရောဗျ ။
နောက်တခါ '' ငါ ကံဆိုးလိုက်တာ '' လို့ တွေးမိခဲ့ရင် လမ်းပေါ်မှာ တောင်းစားဖို့ ဆိုပြီး လက်တစ်ဖက် အဖြတ်ခံရတဲ့ ကလေးကို သတိရလိုက်ပါဗျာ .........။
http://eguyz.com/be-content-about-your-life/ ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည် ။
မူရင်းစာရေးသူနှင့် ဘာသာပြန်သူ ဆရာမ Spring Flowers ကို ကျေးဇူးတင်စွာ credit ပေးပါသည်။ ( Fireflies )
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/27/2014 07:49:00 AM No comments:
သူကြွယ်နဲ့ သူတောင်းစား ( နိုင်းနိုင်းစနေ ဘာသာပြန်သည်။ )
ကျွန်တော် အင်္ဂလန်မှာ နေတုန်းက ထူးဆန်းတဲ့ နာမည်နဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။ ဆိုင်နာမည်က “သူကြွယ်နှင့် သူတောင်းစား” ဖြစ်တယ်။ ဒါ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဖူးတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်က ရှေးကျပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀က အင်္ဂလန်ကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရအောင်
ဆိုင်တံခါးဝ ကောင်တာမှာ အလှူခံသေတ္တာလေး တစ်လုံးချထားတယ်။ သေတ္တာပေါ်မှာ ဆိုမားလီးယား (Somalia) အတွက်လို့ ရေးထားပြီး ဘေးမှာ မကြည့်ရက်စရာအငတ်ဘေးကြုံ နေတဲ့လူတွေရဲ့ ပိုစတာပုံ တစ်ခု ကပ်ထားတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဒီလိုပိုစတာ ကပ်ထားတာ နည်းနည်းတော့ အမြင်မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပြီး ဆိုင်ထဲကို ကျွန်တော် အမြန်ဝင် ထိုင်လိုက်တယ်။ ဆိတ်ပေါင်နှပ်နဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်မှာပြီး ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ အဲလိုစောင့်နေတဲ့ အချိန်အတွင်း ဒီဆိုင်နာမည်ကို ဘာဖြစ်လို့ “သူကြွယ်နဲ့ သူတောင်စား” လို့ ပေးထားရသလဲဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ သိချင်စိတ်က နှိုးထလာတယ်။
ဆိုင်ရှင်က ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ပြောပြခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၀ ကျော်လောက်က ဒီနေရာ တစ်ဝိုက်လုံးကို မြို့စားကြီးတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ မြို့စားကြီးဟာ အသက်(၆၀)ပြည့် မွေးနေ့မတိုင်မီ တစ်ရက်မှာ ပန်းချီဆရာတစ်ဦး ရှာပြီး သူ့အိမ်နဲ့ မိသားစု အားလုံးကို ပုံဆွဲခိုင်းစေခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ ပုံကို ဒီဆိုင်ထဲမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ်။ ပုံကို ကျွန်တော်တွေ့တော့ ပုံထဲက သူဌေးလင်မယားက ဥပဓိရုပ် ခန့်ခန့်နဲ့ သားသားနားနားပဲ။ သူ့သားသမီးတွေက အိမ်ရှေ့ မြက်ခင်းပေါ်မှာ ထိုင်သူက ထိုင်၊ ရပ်သူက ရပ်၊ ကစားတဲ့သူက ကစားနဲ့ ပန်းချီကားထဲက ရှုခင်းက တကယ့်ပျော်စရာ အတိ၊ ဆွဲထားတယ်။
မွေးနေ့ပြီးတော့ မကြာဘူး.. မြို့စားပိုင်နက်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းစရာ အဖြစ်တစ်ရပ် ပေါ်ခဲ့တယ်။ လယ်သမားတစ်ဦး သေသွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ မကျန်းမမာ ဇနီးဖြစ်သူက ကလေး(၄)ယောက်နဲ့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်လိုက်တယ်။ သနားစရာကောင်းတာက လယ်သမား ဇနီးဟာ ကလေးတွေစားမဲ့ အစာထဲ အဆိပ် အရင်ခတ်ပြီး ၊ကလေးတွေ သေသွားတာကို ကြည့်ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ကိုယ် ကို အဆုံးစီရင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။
အဲဒီအဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း မြို့စားဟာ ပန်းချီကားချပ်ကိုပဲ ငေးစိုက် ကြည့်နေတော့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ လူတွေက မေးတော့ မြို့စားက မဖြေခဲ့ဘူး။ စိတ်ပူပြီး အတင်းမေးမှ ပန်းချီကားချပ်ထဲမှာ သူတောင်းစား နှစ်ယောက်ကို တွေ့မိတဲ့အကြောင်း၊ မြက်ခင်းပြင်မှာ ထိုင်ပြီး သူတို့ကို လက်ဖြန့် တောင်းနေတဲ့အကြောင်း၊ ဒါကို သူ့အိမ်သားတွေက မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်ပြီး လျှစ်လျှူရှုထားတဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ်။ ပန်းချီကားထဲက သူတောင်းစား နှစ်ယောက်ကို ဘာဖြစ်လို့ အရင်က သူ သတိမပြုခဲ့မိတာလဲ ဆိုတာကို မြို့စားကြီးက နားမလည်ခဲ့ဘူး။
ပန်းချီကားထဲက သူတောင်းစား နှစ်ယောက်ကို သူ့အိမ်သားတွေကလည်း မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ငြင်းခုန် မနေကြဘူး။ တစ်နေ့မှာ မြို့စားက အိမ်သားအားလုံးကို သူ့စာကြည့်ခန်းမှာ စုဝေးစေပြီး စကားအချို့မှာခဲ့တယ်။ အဲဒီစကားကို သားစဉ်မြေးဆက် မှတ်သားထားရမယ်
လို့လဲ ပြောတယ်။ မြို့စားပြောလိုက်တဲ့ စကားက ရိုးရိုးလေးပါပဲ
“သေးငယ်တဲ့ နယ်နိမိတ် အတွင်းမှာ သူကြွယ်နဲ့ သူတောင်းစား အတူတကွ ရှိနေတာဟာ ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ ” ဆိုတာဖြစ်တယ်။
မြို့စားရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် တွေကလည်း တော်ရှာပါတယ်။ သူတို့ဟာ စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်သလို အားနည်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း အမြဲတမ်း ကူညီခဲ့တယ်။ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ ပြောပြချက်အရ အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ မရှိ ဆင်းရဲသားတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်တဲ့
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/27/2014 07:48:00 AM No comments:
ဒေါသလွှမ်းမိုး စိတ်ဆိုးသူထံသို့ ရန်သူတွေလိုလားတောင့်တတဲ့ အပြစ်ခုနှစ်ပါးရောက်လာ နိုင်တယ်။
ဒေါသလွှမ်းမိုး စိတ်ဆိုးနေသူဟာ ဒေါသလွှမ်းမိုး စိတ်ဆိုးနေလို့
၁။ မည်မျှပင် ပြုပြင်ချယ်သ အလှဆင်ထားစေကာမူ
၂။ မည်မျှပင် အိစက်ညက်ညောသည့်အိပ်ရာမှာအိပ်စေကာမူ အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်သည်။
၃။ သင့်၊ မသင့်ကို မနှိုင်းချင့်ဘဲ မိမိထင်ရာကိုသာ
ပြုတတ်သောကြောင့် အကျိုးစီးပွား ပျက်တတ်သည်။
၄။ ဒေါသအလျောက် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ပါက
၅။ လူမုန်းများသဖြင့် ရရှိထားသော အခြံအရံ၊
၆။ မလုပ်သင့် မပြောသင့်သည်ကို ပြုလုပ်သဖြင့်
၇။ ဒေါသအလျောက် ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်တို့ဖြင့်
မကောင်းမှုကိုပြုကျင့်ပါက သေသောအခါ အပါယ်သို့ ရာက်ရ၏။
- (ကောဓသုတ်၊ အဗျာကတ၀ဂ်၊ သတ္တကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/26/2014 06:44:00 AM No comments:
မတွေးဝံ့စရာ ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာလောက်ပဲ ရခဲ့တဲ့ တောင်အာဖရိက နောက်ခံလူ
မဟာမက်ဆုရဲ့ ကံကတော့ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကားတစ်စီးလုံးကို ပလက်ဖောင်းသံတန်း ဖောက်ဝင်သွားခဲ့ပေမယ့် အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ မဟာမက်ဆုဆိုတာ တောင်အာဖရိကကလပ်
တောင်အာဖရိကလက်ရွေးစင် နောက်ခံလူ မဟာမက်ဆု မောင်းနှင်လာတဲ့ BMW 3-series ယာဉ်ဟာ ဂျွန်ဟန်ဆန်ဘာ့ဂ်မြို့၊ မာဘိုရိုဥယာဉ်နားမှာ လမ်းချော်ပြီး လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းသံတန်းကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ၀င်တိုက်မိခဲ့တာပါ။ ရှေ့မှန်ကို ဖောက်ပြီးဝင်လာတဲ့ သံတန်းက ကားနောက်ပိုင်းကို ထုတ်ချင်းပေါက်သွားပေမယ့် မဟာမက်ဆုကတော့ ဒဏ်ရာအနည်းအကျဉ်းပဲ ရခဲ့ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/26/2014 06:35:00 AM No comments:
သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူများကြားမှ ထူးထူးခြားခြား စားသောက်ဆိုင်
မွတ်ဆလင် သင်္ချိုင်းနေရာ တစ်ခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်တွင် မနက်ပိုင်း ဆိုင်စခင်းကတည်းက ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် သင်္ချိုင်းတွင် မြှုပ်နှံထားသူတို့၏ ဝိညာဉ်များကို ရည်ရွယ် ဆုတောင်းပေးပြီးမှ လုပ်ငန်းစတင်လေ့ ရှိကြသည်။
လူအများက အမင်္ဂလာဟု သတ်မှတ်သော၊ လာဘ်တိတ်သည်ဟု ယူဆသော မြင်ကွင်းမျိုးသည် ခရစ်ရ်ှနန်ကတ်တီအတွက်မူ လာဘ်ရွှင်သော၊ ကံကောင်းသော နိမိတ်ပုံမျိုး ဖြစ်နေသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အာမာဒါဘက်ဒ်မြို့တွင် ကတ်တီသည် စားသောက်ဆိုင်လေး တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဆိုင်ဖွင့်သော နေရာသည် သင်္ချိုင်းဟောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကော်ဖီဆိုင်ငယ်လေးအဖြစ် အစပြုခဲ့သော ကက်တီ၏ လုပ်ငန်းသည် ယခုအခါ အတော်လေး အောင်မြင်ပြီး လူဝင်များသည့် စားသောက်ဆိုင် တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖောက်သည်များအတွက် ဆန်းကျယ်သော ခံစားမှုမျိုးကို မိမိ၏ဆိုင်က ပေးစွမ်းနေ၍ဖြစ်ကြောင်း ကက်တီက ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဆိုသည်။
အမှန်တကယ်လည်း အုတ်ဂူများဘေးတွင် စားပွဲခင်းပြီး စားသောက်ရသော ခံစားချက်မျိုးသည် သာမန် ကြုံရလေ့ရှိသည့် အခြေအနေဟု ဆိုနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ကက်တီသည် ဆိုင်ကို စတင်ခင်းကျင်း ပြင်ဆင်ကတည်းက ယခင်အုတ်ဂူဟောင်းများကို ဖျက်မပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယင်းအစား အုတ်ဂူများကို ဆိုင်အခင်းအကျင်းသဖွယ် ထားရှိကာ နံဘေးမှကပ်၍ စားပွဲများ ခင်းကျင်း ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ မွတ်ဆလင် သင်္ချိုင်းနေရာ တစ်ခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်တွင် မနက်ပိုင်း ဆိုင်စခင်းကတည်းက ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် သင်္ချိုင်းတွင် မြှုပ်နှံထားသူတို့၏ ဝိညာဉ်များကို ရည်ရွယ် ဆုတောင်းပေးပြီးမှ လုပ်ငန်းစတင်လေ့ ရှိကြသည်။ ယခုအခါ ကက်တီ၏ စားသောက်ဆိုင်ကို New Luckyဟု အမည်ပေးထားပြီး လူသိများ ထင်ရှားနေပြီ ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သင်္ချိုင်းမြေက ကောင်းမွန်တဲ့ ကံကြမ္မာတွေ ဆောင်ယူလာပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် လုပ်ငန်းက ဒီအုတ်ဂူတွေနဲ့ ခေါင်းတလားတွေကြောင့်ပဲ ပိုပြီး အောင်မြင် လူသိများလာတာပါ။ လူတွေအတွက် ဒီဆိုင်မှာ လာထိုင်ရတာဟာ ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုပဲလေ။ ကျွန်တော်တို့က အုတ်ဂူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ ဖောက်သည်တွေ အနေနဲ့လည်း အုတ်ဂူတွေကို မြင်နေရတဲ့အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပုံမရဘူး”ဟု ကက်တီက ပြောကြားခဲ့သည်။
စားသောက်ဆိုင်ထဲတွင် အုတ်ဂူ(၁၆)လုံးမျှ ပျံ့နှံ့တည်ရှိပြီး (၁၆)ရာစုခေတ် သူတော်စင် ဆူဖီ၏ အုတ်ဂူပင် ပါရှိကြောင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေသည်။ ကက်တီက “မနက်စောစော အုတ်ဂူတွေကို အရိုအသေပေးပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်စခင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ အုတ်ဂူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အဝတ်တွေနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖုံးအုပ်ပေးထားပြီး ပန်းစည်းတွေလည်း ထားပေးလေ့ရှိတယ်။ သေဆုံးသွားသူတွေကို အလေးအနက် ထားခြင်းဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆပါတယ်”ဟုလည်း ရှင်းပြသွားသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/26/2014 06:28:00 AM No comments:
▼ 2014 (2354)
အကြမ်းဖက် ဂိမ်းတွေကြောင့် ရန်လိုတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတေ...
မတွေးဝံ့စရာ ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာလောက်ပဲ ရခ...
သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူများကြားမှ ထူးထူးခြားခြား စားသောက်ဆိ...
သင့်ကို စောင့်ကြည့် နေကြပြီလား ?
ဆရာတော်ဦးဇောတိကထံသို့ ဆေးကျောင်းတစ်ဦးမှ ပေးစာ
ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းသား ငွေနှင့်ပညာ ဘယ်အရာပို ...
တွဲဖက်စားပါက ပိုအကျိုးရှိစေသော အစာများ
ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်စေတဲ့ ရေချိုးသောနည်းလမ်းများ...
ဇာတိပ္ဖိုလ်သီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ကြောင်လျှာ(Indian Trumpet Flower)ကပေးတဲ့ အစွမ်းမျာ...
ဘ၀တစ်လျှောက် မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ အစွဲဆုံးအချိန်
အပျို စစ်စစ် များသာ ဖတ်ရန်
ရွှေတြိဂံနယ်မြေ မြန်မာ-ထိုင်း-လာအို ဆွမ်းဆန်စိမ်းစု...
စာမေးပွဲ ဖြေနေစဉ် ပီကေဝါးခြင်း၏ ဆိုကျိုး
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး - Buddhist...
သင်္ကြန်အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးရင် ကောင်းမလဲ
ည ၇နာရီကျော် မှာ ညစာစားရင် ကိုယ်အလေးချိန်တတ် သလား...
ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံချိန်တွင် သိထားသင့်သော အချက် (၇...
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မှာ အမွှာညီအစ်ကို ရှိသလား...
ဝန်ထမ်းများ ပျော်ရွှင်ပါမှ အလုပ်ပိုမိုတွင်ကျယ်ဟု လေ...
မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်မရအောင် သန္ဓေတားနည်းများ
တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ၃၂ ကြိမ်အထိ မလျှော့သော ဇွဲ...
ဘ၀ကို ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင် စွန့်လွှတ်ရမယ့်အရာ...
မိဘအပေါ်မှာ ကျေးဇူးတင်တဲ့စကား ပြောတတ်ကြရဲ့လား
ကြွက်ကောင်ရေ သောင်းနဲ့ချီ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထား...
ကလေးများရှေ့မှာ မိဘများရန်ဖြစ်ပြပါက ကလေးများ၏ ဦးေ...
ဗိုက်သားဖောက်ခံ ရသာ နွားများ
ဘဝမှာ ပျော်ပျော် နေထိုင်ရန် နည်းလမ်း
ထူးထူး ခြားခြား အရွယ်တင် သူ
အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေသူများ ကိုယ်စိတ် ကျန်းမာရေး ပ...
တကယ်ချစ်ပါသော်လည်း ခွဲရခြင်း အကြောင်း
ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းလှူဒါန်းခဲ့သည့် မင်းတိုင်...
တပေါင်းလပြည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ ပြည်တော်ဝင် အခါတော်နေ့
ကျောင်းသူ တစ်ဦးက စက္ကန့် ၂၀ အတွင်းအားပြည့်စေမည့် ဘ...
မိဘများ သတိမထားမိသေးသော ကလေး များအတွက် စမတ်ဖုန်း အ...
လာပြန်ပြီ နောက်တစ်ချီ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တဲ့ဟေ့
မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးတွင် စာအုပ် သက်တမ်းတို...
အချိန်တစ်လမကြာမီ အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပလာစေမည့် နည်...
စိတ်ဓာတ်ကျ နေသူတို့ အတွက် ထိရောက်သော လေ့ကျင့်ခန်း
ရွှေစာရံ၊ ထန်းရွက်ပုတီးဆွဲကြိုးနှင့် မန္တလေး
တမိသားစုလုံးကို သတ်လိုက်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်
၁ နှစ်ဝင်ငွေ သိန်း ၂၀ အထက်ရှိသူများ ၀င်ငွေခွန်ဆောင...